DAAWADA DHIRTA WAA ASALKA DAAWADA NALA SOO XIRIIR TEL +16316010861 AMA +447477751355: dareen la aanta dumarka
DAAWADA DHIRTA WAA ASALKA DAAWADA NALA SOO XIRIIR TEL +16316010861 AMA +447477751355
HADDII WICITAAN KA MAREYKANKA FREE KUU YAHAY AMA AAD ADEEGSATO VIBER KA WAXA AAD NA GA LA SOO XIRIIRI KARTAA NUMBER KA AH +16316010861 SIDOO KALE WhatsApp WAXAAD NAGA HELEYSAAN NUMBERKA +447477751355 MEEL KASTA OO AAD DUNIDA KA JOOGTO DAAWOOYINKA WAXAA LAGUUGU SOO GAAR SIINAYAA QAABABKA D.H.L KA AMA BOOSTADA GUDAHA KENYA NA PARCELS. EMAIL US nalasooxiriir@live.com nalasooxiriir@doctor.com nalasooxiriir@gmail.com nalasooxiriir@consultant.com
TOOS ULA XIRIIR DHAQAATIIRTA TELEFOONKA +16316010861 AMA +19149775731
VIBER +16316010861 AMA +447477751355
+19149775731 AMA +18452055008
WAXAA KALIYA LOO ADEEGSAN KARAA WICITAANKA TOOSKA EE DHAQAATIIRTA
WAXAAD SI TOOS AH NAGA LA SOO XIRIIRI KARTAAN TELKA +16316010861 AMA +19149775731
VIBER KU WAA +16316010861 +447477751355 XIRIIRKA TOOSKA WAA +19149775731 +390918777633
+16316010861 AMA +447477751355 MAHAD SANIDIIN
WAXAAD NAGA HELEYSAAN WhatsApp NUMBERKA AH +447477751355
WhatsApp KU WAA +447477751355
HADDII WICITAAN KA MAREYKANKA FREE KUU YAHAY AMA AAD ADEEGSATO VIBER KA
WAXA AAD NA GA LA SOO XIRIIRI KARTAA TEL KA AH +16316010861 ISLA NUMBER KAN AYAAD ADEEGSAN KARTAA HADDII AAD ISTICMAASHO VIBER
WAXAAD DHAQAATIIRTA KULA KULMI KARTAA ONLINE KA ADEEGSO VIBER NUMBER +16316010861
Waxaad dhaqaatiirta kula kulmi kartaa online ka adigoo adeegsanaya fariin qoraal ah emailada kala ah nalasooxiriir@gmail.com nalasooxiriir@doctor.com nalasooxiriir@consultant.com Mahad sanidiin
LA SOO XIRIIR DHAQAATIIRTA WEBSITE KANI
WAXAAD SI TOOS AH DHAQAATIIRTA KALA SOO XIRIIRI KARTAAN TELEFOON NUMBERADA KALA AH +16316010861 AMA KAN KALE EE AH +447477751355 TELEFOON KA FIXED KA AH WAA +390918777633 CINWAANADA EMAILKA KALA AH nalasooxiriir@live.com nalasooxiriir@gmail.com nalasooxiriir@yahoo.com SIDOO KALE WAXAAD SI TOOS AH DHAQAATIIRTA KULA KULMI KARTAA ONLINE KA WAQTI KAMIDA 24 KII SAAC CINWAAN KU WAA nalasooxiriir@gmail.com MAHAD SANIDIIN.
DAAWEYNTA DHAMAAN CUDURADA GUUD
Xarumaha caafimaad ka website yadan ayaa kuu diyaariyeen daaweyn rasmi ah inshaa allaah dhamaan xarumaha caafimaad ka iyo dhaqaatiir tooda ba waxa heegan buuxa u yihiin sidii ay u caawin lahaayeen dadka soomaaliyeed ee xanuun sanaya meel kasta oo ay dunida ka joogaan daawooyin iyo daaweyn rasmi ah waxaa diyaar idiin la ah dhamaan xarumaha caafimaad ka ee website yadan la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho xal caafimaad oo waara inshaa allaah mahad sanidiin.
Nagu saabsan innaga
Oof wareen pneumonia
Dhibaatooyinka biya baxa
Qalalka / suuxdinta
Biya baxa deg dega ah
Dhalmo la aanta
dareen la aanta dumarka
Maxaa sababa tabardarida xaga
galmada (kacsiga) ee soo wajahda
Tabardarida soo wajahda dumarka
xiliga galmada ee afka qalaadna lagu
magacaabo (sexual dysfunction) ayaa
waxaa lagu qeexaa dhibaato soo
wajahda xiliga isu taga jinsiga taas oo
alaaba lala xiriiriyo qanaaco la’aan kadhalata isu taga. Tusaale ahaan culimada amaba
dhaqaatiirta jinsiga ayaa waxey
sheegaan in illaa 4 heer uu maro isu
taga jinsiga kuwaas oo kala ah,
1:dareemid raaxo marka hore,
2: u bislaasho galmo,
4: iyo weliba raali ahaansho imaato kadib marka ay dhammaato howsha isu
taga taas oo qof walba 2da lamaane ay
dareemayaan in ay gareen meel ay u
wada hanqal taagayeen oo ah in mid
walba uu qanciyay midka kale. Cilmi baaris lasameeyay ayaa waxey soo
jeedisay 43% dumarka iyo 31% ragga in
ay so wajahaan culeys yo kaheysta
xagga jinsiga, mowducaan ayaa ah mid
inta badan dadka ay nacebyihiin in laga
hadlo lakiin nasiib wanaag kiisaska inta badan ee cuduradaan ayaa ah mid
si fudud loo daaweyn karo sidaas
darteed ayaa waxaa muhim ah in aad
la sameysid wada tashi dhaqaatiirta. Hadaba maxaa sababa dhibaatooyinkaan?
Asbaabaha sababa cudurkaan ayaa
waxaa la’aminsanyahay in ay yihiin
laba sabab oo kala ah 1- asbaabo ah fisikaal ( physical causes ) 2- asbaabo ah
wal wal laxiriira saykoloji
(psychological causes). asbaabaha fisikaalka ah ( physical
causes) ayaa ah mid laxiriirta cafimaadka iyadoo ay jiraan
cuduro si toos ah loo la xiriiriyo in ay
sabab u yihiin in haweyneydu uu
kudhaco cudurkaan tabardarida xagga
galmada iyadoo cuduradaasna ay
yihiin sida cudurka kaadi macaanka amaba sokorowga (diabetes) cudurada
kudhaca wadnaha ( heart diseases),
cudurada kudhaca neerfaha
(neurological diseases), isu dheelitir
la’aanta hormoonada (hormonal
imbalances),cudurada karoonikada ah sida cudurka fashilka kilyaha (kidney
failure), iyo cudurka kale ee fashilka
beerka ( liver failure ), cabida xad
dhaafka ah ee alkolada amaba
khamriga, isticmaalka daroogooyinka
iyo weliba dhibaato dhinaceedka ay leyihiin qaar katirsan dawooyinka sida
(antidepressant drugs) kuwaas oo loo
isticmaalo daweynta dadka qaba
walaaca ama shooga, dhammaan
asbabahaan ayaa waxey dhaliyaan hoos u dhac kuyimaada damaca xagga galmada. asbaabaha saykolojiga amaba laxiriira dhimirka ayaa isugu jira asbaabo laxiriira daalka amaba istareeska walaac ( anxiety), walaac ay kaqabto haweneydu galmada, dhibaatooyin xagga xiriirka u dhaxeeya labada qof , welwelka xad dhaafka ah , dareen ah in haweyneydu dareento eednaan, amaba welwel kudhacay haweeneyda isu tag galma hore oo ay cabsina kaqabto galmada.
Yuu kudhaca dhibaatooyinka tabardarida galma? Guud ahaan rag iyo dumarba wuu kudhici karaa wuxuuna kudhacaa dhamman labada jinsiba da’ kasta badanaana wuxuu kudhacaa dadka qaan gaarka ah ee cafimaad ahaana aan aheyn kuwo aad u cafimaad qaba oo nafaqo ahaana aan aad u nafaqysneen. Sidee u sameeysa tabardarida galmada dumarka?
Dhibaatooyinka ugu caansan ee ilaa
hadda la ogyahay ee laxiriira
tabardarada galmada dumarka ayaa ah. awood la’aanta xagga rabida galmada
(inability to sexual desire) arimahaan
ayaa iyagu waxaa lala xiriiriyaa dareen la’aanta in haweneydu rabitaankeeda xagga galmada uu hoseeyo oo aysana wax han ah u heynin galmada waxaana la’aminsanyahay in cunsuro badan ay
taa ugu wacanyihiin sida isbedelka
hormoonada, xaaladaha caafimaadka
iyo daweyn laga soo daweeyay cudurka
kansarka iyadoo doweyntaasna loo
maray kiimiko (chemotherapy), sidoo kale welwelka kaheysta haweeneyda
ficiladeeda ayaa iyana qeyb kaqaata
waxaa kale oo iyana door kuleh habka
isku xiga galmada iyo wareegyada
galmada (sexual routines) tani ayaa
iyana waxaa la’aminsanyahay in ay kaqeyb qaadato rabitaan la’aanta
galmada , iyo ugu danbeynta qaabka
nolosha haweneyda. awood la’aanta in ay si wanaagsan u dareento amaba u kacsato (inability to become aroused), dareemid la’aanta haweneyda xiliga galmada ayaa aalaaba waxaa lala xiriiriyaa yarida qoyaanka xubinta tarenkeeda ( vaginal lubrications) sidoo kale waxaa si toos ah loola xiririya walaaca iyo weliba in aysan haweneyda aysan u istimtaacin si kufilan, baarayaasha cudurada galmada
ayaa waxaa kale oo ay ku howlan yihiin
sidii ay u ogaan lahayeen sameynta uu kuleeyahay qulqulka dhiiga xubinta
taranka dumarka iyo kintirka (clitoris)
iyo sida uu uga qeyb qaato
dhibaatooyinka kaheysta haweenka
kacsiga. xanuun ka qabsada xubinta taranka haweenka xiliga galmad (painful during intercourse) xanuunadaan dhaca xiliga galmada ayaa waxaa sababa dhibaatooyin fara badan oo ay kamid yihiin infakshanka xubinta taranka haweenka, cufnaanta amaba mugga berkada xubinta taranka
haweenka ( pelvic mass), cudurada lagu
kala qaado galmada (STD) iyo xaalad
lagu magacaabo (viginismus) taas oo ah
xanuun iyo xafaf kasoo wajaha haweenka murqaha kuxeeran afaafka
hore ee ilinka amaba albaabka hore ee
xubinta taranka haweenka wuxuuna
kudhacaa haweenka badana kabaqda
is liska 2 da xubnood ee taranka
dumarka iyo ragga. Side loo baara tabardarida galmada
dumarka? Si loo baaro taabardarida galmada dumarka ayaa dhaqtarku wuxuu bilaaba ugu horeynba in u sameeyo baritaan dhanka jirka ah ( physical exam) isaga oo qimeynaya astaamaha uu leeyahay cudurkaan ayaa dhaqtarku wuxuu sidoo kale sameeya baarida berkeda xubinta taranka ( pelvic exam) si uu u qimeeyo faya qabida xubnaha taranka isagoo welina sameeya baritaan dheer oo lagu magacaabo (Pap Smear) kaas oo ah in labaaro unugyo laga soo qaaday dhuunta hore ee minka amaba riximka si looga baaro in haweeneydu qabto cudurka kansarka ee dhuunta riximka (cervical cancer),baritaanka noocaan oo kale ahna waxaa lagu ogaadaa xaaladaha kahoreeya kansarka kudhaco dhuunta riximka (precancerous conditions) hadaba baritaankaan ayaa sidoo kale waxaa lagu ogaadaa isbedelka unugyada dhuunta riximka , alaaba baritaankaan wuxuu kasaacidaa dhaqtarka in uu u sameeyo bukaanka
daawada ugu haboon si loo daaweeyo
mushkiladaha ay dhaliyaan cudurada
kudhaco taranka haweenka. Side loo daweeyaa tabardarida galmada
dumarka? Sida ugu haboon ee loo daweeyo tabardarida galmada dumarka ayaa ah dadaal wadareed ay sameeyaan hawaneyda qabta cudurka, dhaqtarka,iyo qof u tababaran daweynta dadka qaba cudurkan badanaana noocyada cudurkaan kuwa ladaweyn karo sida kuwa laxiriira dhibaatooyinka xagga dhimarka (psychological problems) ayaa si fudud loo daweeya kadib marka la daweeyo ugu horeynba dhibaatada xaga dhimirka ah taas oo ah mida ku sababtay dhibanaha in uu helo
cudurkaan tabardarida galmada sida
welwelka (anxiety) shooga iyo wixii
lamid ah. Istiraatijooyinka kale ee lagu daweeyo cudurkaan ayaa ah sida soo socota:- Qofka oo lasiiyo aqoon kufilan ee xagga isu taga jinsiga (providing
education) aqoontaas oo ah sida ay u
sameysan yihiin xubnaha jirka banii
aadamka gaar ahaan kuwa laxiriira
jinsiga, sida galmadu u shaqeyso iyo isbedelka caadiga ah ee laxiriira
hor umarida cimriga aadanaha iyo sida
uu ugu leeyahay saameyn dhaqanka
galmada intaa waxaa si dheer
bukaanka oo loo sheego in uu wax
kabedelo dhaqanka galmadiisa isagoo lagula taliyo haddi dhibaatooyin
dhimirka ahna heystaan in uu aado
dhaqtar sameeya tashiga xaga
dhimirka (consuling) si uu uga samata
baxo dhibaatooyinkaas. Dar dar galinta istimtaaca (enhancing
stimulation). Yareynta xanuunka xiliga galmada
(minimizing penetration pain during
intercourse) tan ayaa iyana ah mid kale
oo ah wax tar si loo daweeyo
xanuunkaan waana in looga tagaa
haweneyda xiliga galmada meel qeyb ahaan yareyn karta xanuunka kasoo
wajaha isliska xubnaha taranka xiliga
ay socoto galmada, waxaa kale oo lagu
taliya si loo yareeyo xanuunka isliska in
la’isticmaalo waxyaabo lagu qooyi karo
xubinta taranka haweneyda sida qooyaha canbarka ee afka qalaadna
loogu yeero ( vaginal lubricant) kaas oo
ah waxyaabo sibix ah oo la mariyo
xubinta taranka kahor galmada si uu u
yareeyo suurta galnimada xanuun
kadhasha isliska, sidoo kale waxaa lasheega in kuqubeysashada
haweneydu ay ku qubeysato biyo kulul
kahor wax yar galmada uu kasaacidi
karo in wa xoogaa qoyaan ah ay kasoo
bixi karaan xubinteeda taranka xiliga
galmada. Mala daaweyn kara tabardarida galmada dumarka? Daaweynta guusha kudhmaata ee
tabardarida galmada dumarka ayaa uun
waxey kuxirantahay marka hore
asbaabaha sababay tusaale ahaan
muqaalka kore ee daaweynta fudud
ayaa ah kuwa sida fudud loo daweyn karo ee badanaana laxiriira arimaha
dhanka saykolojiyada ee uu dhaliyo
walaaca shooga iyo daalka laga qaado
shaqada ( work stress). Sidee saameyn ugu leeyihiin hormooanda tabardarida galmada dumarka?
Hormoonada ayaa waxaala’aminsanyahay in ay door kuleyihiin qaabeynta shaqada galmada dumarka iyadoo sidoo kalena lasheego in hoos u dhaca hoormoonka lagu magacaabo estrogen ee isaga doorka kaciyaara qaabeynta howsha galmada dumarka uu leeyahay dhibaato fara badan hormoonkaan ayaa waxaa si toos ah yaraanshiyahiisa loola xiriiriya
horumarka da’da amaba cimriga
haweneyda iyadoo xiliga ay kusii dhawaneyso quusta (menopause) uu sii
yaraado, inta badanna dumarka waxey
usoo joogaan isbedalo dhanka galmada
marka uu cimrigoodu horay u maro
isbedaladaas oo isugu jira in qoyaanka
xubinta taranka yaraado, iyo dareenka afka canbarka oo yaraada. Daraasado dheraad ah oo lasameeyay
dhawanahaana waxey soo jeediyeen in
hoos u dhaca kuyimaado hormoonka
ragga ee dhinaca galmada uu isagu
xitaa door kuleyahay kana qeyb qaato
yaraanshiyaha damaca galmada dumarka, dhaqaatiirta cafimaadka ayaa
weli waxey baritaan kuhayaan
faa’iidada hormoonada iyo qaar
katirsan dawooyinka loo isticmaalo tabaryarida galmada dumarka. Saameyn ceynkee ah ayuu ku leeyahay
qaliinka lagu magacaabo
(Hysterectomy) tabardarida galmada
Haddaba in badan oo katirsan dumarka
ayaa waxaa soo wajaha dhibatooyinka
tabardarida galmada marka lagu
sameeyo qaliinka afka qalaad lagu
magacaabo (Hystrerectomy) kaas oo ah
in lagu sameeyo haweyneyda qaliin amaba jaraaxo lagaga saarayo riximka,
dhibatooyinkaan ayaa waxey isugu
jiraan in ay ku dhacdo haweneyda
damac la’aan amaba Rabitaan xagga galmada iyo in ay hoos u
dhacaan qoyaanada kasoo baxa xubinta taranka, waxaa kale oo
kudhaca xafaf iyo xanuun badan oo
kasoo wajaha xubinta taranka,
waxaana dhaqaatiirta cudurada jinsiga
ay aaminsan yihiin in ay taa ugu
wacan tahay isbedelka xagga hormoonada ee kudhacaya haweenka
marka laga saaro riximka tiiyo ay sii
dheertahay waxyeelada gareysa
neerfaha xubinta taranka qalinka
dartiis ay yareyn karaan dareenka
illaah u siiyay xubinta taranka dumarka in ay dareento jinsiga kasoo horjeeda
(ragga). Sidee saameyn ugu leedahay quusta (Menopause) tabardarida galmada dumarka? Haweenka ayaa marka ay garaan xiliga quusta amaba marka ay joojiso in ay ku dhacdo caadada waxaa hoos u dhaca
homoonka lagu magacaabo Estrogen
kaas oo qeyb ahaan qabta shaqada
laxiriirta dhaqanka galmada sidoo kale dareenka ah in haweneydu ay kusii
dhawaaneyso quusta ayaa wuxuu ku
leeyahay saameeyn in wa xooga
haweenka uu yaraado dareenkeeda
xagga galmada dabadeedna ay
adkaato in ay si wax ku ool ah ay u dareento galmada, waxaana jira
xaalado mar mar dhaca oo ah in
haweenka qaar uu dareenkooda xagga
galmada uu saa’ido xiliga ay kusii
dhawaneyso quusta taas oo badana lala
xiriiriyo haweenka aan horay wax u dhalin kuwaas oo is leh kahor quusta
aad wax dhashid. Gormee ayaad u bahantahay in aad dhaqtar kala xiriirto dhibaatooyinka tabardarida galmada? Inta badan haweenka wey las oo darsaan dhibaatoyinkan tabardarida galmada waqti uun katirsan noloshooda, si kasta oo ay ahaataba marka ay si joogta ah u Cabato ayaa waxey ku sababi karaan haweneyda iyo lamanaheeda dhibaatooyin xagga qoyska ah kuwaas oo ku yeelan kara saameyn aan wanaagsaneyn xiriirka qoyskooda, haddaba haddii aad si joogta uga cabato dhibaatooyinkan lasoo xiriir dhaqaatiirta webkani si loo qimeeyo dhibaatada ku heysata kadibna laguu daweeyo inshaa allaah.
Waxaa jiraan cuduro iyo xanuuno badan oo sababi kara tabar yarida dumarka iyo ragguba kala soo derista hamiga galmada.
Haddaba haddii aad aad ka cabaneyso dhibaatooyin kaala soo gudboonaada dareemaha jinsiga rag iyo dumar ba la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirtu waxey kuu ballan qaadeysaa in si fudud iyo waqti kooban lagaaga daaweeyo dhamaan cilladaha jinsiga ah iyo dhamaan xanuunada ku dhaca xubnaha taranka rag iyo dumarba inshaa allaah. Nala soo xiriir si aan d u hesho caawimaad inshaa allaah. Mahad sanidiin.
Posted by DAAWADA DHIRTA WAA ASALKA DAAWO at 14:16
WAA MAXAY ENDOMETRIOSIS YUU KU DHACAA MISE LA ISKA QALI KARAA
Endometriosis waa dhibaato guud keentana xaalado caafimaad daro oo saameysa boqolkiiba 10 dumar ah. Endometriosis waa xaalad ka dhalata unug yada dhiiga caadada ee gudaha makaanka dumarka oo laga helo meelo aan caadi ahayn oo jirka kamida waa xaalad keenta in unugyada dhiiga caadada ee gudaha makaanka u soo baxaan dibada makaanka iyagoona ku tarma meelo ka baxsan gudaha makaanka dumarka. Badanaa in kastoo endometriosis ku dhici karo lafaha miskaha balse guud ahaan endometriosis wuxuu dhalin karaa astaamo badan sida xanuun miskaha oo joogto ah sidoo kale endometriosis wuxuu sababaa dhalmo la'aan joogto ah. Maxaa keena endometriosis? Hadalka ugu caamsan waxaa weeye waqtiga dumarka caadadu ay heyso ayaa Unuga caadadu wuxuu dhaafaa dib dib isagoo sii dhex maraya tubooyinka makaanka iyo lafaha miskaha dhexdooda halkaas oo marka unuga caadadu gaaro uu ku dhagayo isla markaana uu ku korayo. Endometriosis wuxuu ka mid yahay cudurada aad ka ugu fida dhaxal ka, markaa waxa ay u badan tahay inuu kugu dhaco haddii hooyadaa ama dumarka kale ee qoyskaaga ahi ay qabeen. calaamadaha caamka ee endometriosis waxaa ka mid ah: 1: dhabar xanuun aad u daran oo joogto ah isla markaana haweenta si joogta ah u hayya oo aaney waxbo ka qabsaneyn sidoo kale dumarka qaarkood ayaa dhabar xanuun kaas aawgii dhaqaatiirta ugu sameeyaan qalliin xagga dhabarka ah. 2: Xannuun xagga caadada ah dumarka oo ku xanuun sada caadada iyagoona dareema xanuun ubucda hoose oo aad u daran. 3: Xannuun xilliga galmada dumarka oo dareema xanuun badan xilliga ay la galmoonayaan ninkooda. Xannuunka miskaha ee wakhtiyada kale ee wareega caadada 4: Tamar yari tabarta oo aad uga yaraata dumarka. 5: socodka caloosha oo xanuun leh ama calool istaag joogto ah. 6: dhalmo la'aan ama hakad ku yimaada dhalmada. Dumarka qaarkood oo ay dhibaato ka haysato uur qaadista waxaa la arkay in ay qabaan endometriosis, xitaa iyagoon laheyn calaamadaha aan kor ku soo sheegnay. Sidee ayey u saameysaa oo hakad u gelisaa endometriosis uur qaadista dumarka? Waxaa jira sababo badan oo dhaliya dhalmo la'aanta waxaana laga yaabaa in ay jiraan wax ka badan hal sabab oo keeneysa dhalmo la'aanta lammaane kasta. Endometriosis waxaa laga heli karaa dumarka ay dhibka ka heysato in ay uur qaadaan. Inta ugu yar ee unug nabar ah oo uu sababey endometriosis ayaa sababi kara in ay dumarka ka xirmaan tuubooyin ka makaanka taasi oo la macno ah mar haddii tuubooyin ka makaanku xirmaan dhalmo la'aan joogto ah oo dumarka la soo darista. arrinta ugu weyn ee keenta sababta endometriosis waxaa ka mid ah: 1: ukumaha dumarka oo noqda kuwo howl gab oo aan la fal gali karin ukxanta ku jirta shahwada ragga 2: haweenta oo xubna heeda taranka soo saaraan sun dabiici ah oo lid ku ah shahwada ragga marka gudaha xubinka taranka haweenka shahwo raggeed soo gasho. Si kastaba ha ahaatee endometriosis ayaa ah xaalad haddii aan deg deg loo daaweynin keeni karta dhalmo la'aan joogto ah dhiig bax keeni kara dhimasho xanuun joogto ah haba ugu darnaadaan dhabarka iyo miskaha makaanka dumarka oo dibada ku soo dhaca dhicin ilamaha uurka ku jira in ay xirmaan tuubooyin ka makaanka dumarka qatara daas oo dhan waxaa sabab u ah endometriosis oo aan si rasmi ah la isaga daaweyn. digniinta ah in dumarka aysan ku deg degin qalliin lagu sameeyo dumarka qaba cudurkaan ayaa ah mid aad iyo aad u heer sareysa waayo haddii la damco cudurkaan in qalliin lagu xalliyo taasi waxa ay keeneysaa aafooyiin cusub oo soo wajaha xubnaha taranka ee haweenka taasi oo ay ka mid tahay iney xirmaan tuubooyin ka makaanka in dhaawacyo culus soo gaaraan tuubooyin ka makaanka ama lagaba gooyo haweenta in haweenta laga saaro dhamaan makaanka iyo xaalado kale oo ay kamid tahay in haweentu weyso oo uusan dib ugu dhicin dhiiga caadada umuurahan oo dhamaantood salka ku sii wato xanuuno iyo cillado kale sida in haweentu isu furmaan kanaalada saxarada iyo kaadida sidoo kale in saxarada iyo kaadida ceshan weyso dhamaan umuurahan waxa ay yimaadaan kadib marka la sameeyo qalliin la doonayo in lagu daaweeyo cudurkaan endometriosis iyadoona cudurkaan uu leeyahay haddii alle idmo daaweyn la hubo oo ku siman laba bilood daaweyn taas oo toos u bogsiin doonta cudurkaan iyadoon wax dhibaata ah oo ka dambeysa aysan jirin inshaa allaah haddaba dumarka soomaaliyeed hooyooyin ka soomaaliyeed waxaan uga digeynaa qalliinada arxan darada ah ee looga sameeyo xubnaha taranka kuwaas oo ku keenaya xanuuno cillado iyo dhalmo la'aan joogto ah intaba. haddaba haddii aad leedahay dhabar xanuun joogto ah isla markaana daawo kasta aad u qaadatay dhaqtar kastana aad ula tagtay ama qaliino lagaaga sameeyay dhabarka ama dhaqaatiirtu ku dhaheen dhabarka ayaa lagaa qalayaa ama aad isku aragtay qeybo badan oo kamida calaamadaha aan kor ku soo sheegnay ama uu jiraba xanuun iyo cudur markaa saameyn kugu yeeshay caafimaad darina kuu keenay ama xanuun ka iyo cudurka uu hayo qofka mida ehel kaaga asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
BAABASIIRKA OO DIBADA KU SOO DHACA
SHAKLIGAN WUXUU KU TUSAYAA BAABASIIRKA OO DIBADA KU SOO DHACA MACNAHA WAXAA WEEYE WAXAA JIRKA IN BAABASIIRKU MARO MARAAXIL BADAN OO UU KU WAXYEELEYNAYO GUDAHA XUBNO BADAN OO JIRKA KA MIDA IYO HALKA UU KU DHACO BAABASIIRKA EE KUDAHA SHISHE EE MALAWADKA AMA DIBADIISABA HAATAN HALKAAN WAXAAD KA ARKEYSAA MARXALAD KAMIDA MARAAXISHA UGU QATARSAN EE BAABASIIRKU KEENO WAANA MARKA DABADA BANAANKA USOO DHACDO WAXAA LA SOXDA BARAR IYO INEY SAMEYSO QARAX DHIIGNA YIMAADO WAXAA DHACDA IN MARKAA QOFKA WAX YEELO KA SOO GAADHO MARKA BAABASIIRKU DIBADA KU SOO DHACO OO NEERFAYAASHA DAREEMAHA WAX YEELO WEYN SOO GAADHA. HADDABA HADII AAD ISKU ARAGTO DHIBAATADAN SI DEG DEG AH ULA SOO XIRIIR DHAQAATIIRTA WEBSITE KAN SI LAGUU DAAWEEYO INSHAA ALLAAH.
QAAR KA KA MIDA XAALADO IYO XANUUNO HAWEENKA KU KEENAAN DHALMO LA AAN.
SHAKLIGA KORE WUXUU KUU QEEXAYAA 5 XAALADOOD AMA 5 KAMIDA XANUUNADA KEENA AMA SABABA DHALMO LA AANTA WAXAANA KAMIDA INUU XIRMO AMA DHAAWAC KA SOO GAARO CUDUR TUBOOYINKA MINKA XAALAD IYADANA LOO YAQAANO ENDOMETRIOSIS XAALAD KALE OO AH FIBROIDS HOWLGABKA UGXAN SIIDEYSKA HAWEENTA IYO FIIXDA KA SOO BAXDA UKUMAHA DUMARKA XAALADAHAAN AYAA KU KEENI KARA DUMARKA DHALMO LA AAN JOOGTA AH MARKA SI AAD WAX BADAN UGA OGAATO XANUUNADAN IYO KUWO KALE BA LA SOO XIRIIR DHAQAATIIRTA WEBSITA KAN SI AAD U HESHO DAAWEYN RASMI AH INSHAA ALLAAH.
mid ka mida daawooyin ka wax tarka u leh cudurada haween ka
Daawadan ama kiniin kaan waa daawo laga diyaariyay dhirta dabiiciga ah wax tarkiisana waxaa kamida. 1: wuxuu soo nooleeyaa dibna u soo dhisaa ukxanta dumarka ee howl gabka noqotay. 2: wuxuu khal khal ka iyo hoos u dhaca ka saaraa hormoonada haween ka guud ahaan. 3: wuxuu si toos ah u saxayaa caadada dumarka iyadoona caadada u imaan doonto bil kasta joogto inshaa allaah. 4: wuxuu baabi iyaa infection nada ama caabuq yada xubnaha taran ka haweenka guud ahaan. 5: wuxuu baabi'iyaa aaryada caloosha iyo dibirada caloosha haween ka xilliga caadada. 6: wuxuu bogsiiyaa dhamaan xanuunada haween ka sida dhabar xanuun ka ubacda miska xanuun ka xanuunada caadada la socdaan. 7: wuxuu baabi'iyaa bararka gudaha makaan ka dumarka. 8: wuxuu dumarka u sahlaa in ay si fudud uur ku qaadaan isagoona qeyb weyn ka qaata dhamaan bogsiinta dhibaatooyin ka la xiriira dhalmo la,aanta bi idnillaah. Daawadan waxa ay u sameysan tahay kiniini waxaana laga qaataa 120 xabo muddo laba bilood ah bi idnillaah dhamaan xanuunada haween ka waxa ay meesha kaga saareysaa 14 ka beri ee u horeysa inshaa allaah. Haddaba wixii macluumaad dheeri ah la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daawooyin rasmi ah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin
Qaar kamida xanuunada ku dhaca xiniin yaha
Sababaha keena Xanuunada xaniin yaha ama qooraha ragga waxaa ka mida wax yaabaha soo socda oo ay ka mid ka yihiin:1: infection ama caabuq ku dhaca xiniin yaha ama qanjirka prostate ka loo yaqaano iyo sidoo kale infection ama caabuq ku dhaca xarigga epididyms ka loo yaqaano.2: Dhaawac ama jug hore oo ku dhacday xiniin yaha. 3: in qofka uu ku dhaco cudurka sababa Bararidda xididda qooraha ee "Varicocele" ka loo yaqaanokaas oo sababaya burtuqburtuqyo qooraha darbigiisa kusameysma siiba dhinaca bidix da.4: cudurka Sheelada "Hydrocele" waxey keeneysaa barar sida in xiniin yaha biyo ku jiraan oo kale.5: Marjiska xaniinyaha "Testicular torsion" wuxuu sababi karaa barar uu la socdo xanuun saaid ah.6: Eernada qooraha waa barar uu la socdo xanuun mar mar ah laakiin yaraan kara ama dib u noqon kara marka aad jiifato. 1: Bararka mar mar ma yaraadaa mararka qaar kood na ma baaba'aa?2: Marka aad qofaceyso ama aad wax culus qaadeyso bararka ma kordhaa?3: Haddii aad jiifsato bararka mabaaba'aa? 4: Bararka ma wax ka soocan xaniin yaha baa oo aad gacanta ku qaban karto?5: Xanuunka aad daremeyso goor ma ayuu bilawday mise bararka ayey wada socdeen oo hal mar ayey bilowdeen?6: Bararka ma sii kordhayaa mise waa sidii uu ku bilowday?haddaba jawaabaha su,aalahan ayaa ah kuwo si rasmi ah u kala cadeyn doona nooca uu yahay cudurka sababaya xanuun ka iyo bararka xiniin yaha ragga soo wajaha iyadoo dhibaatadan noqotay maal mahan mid in badan lagu arko qaar kamida dadkeena iyadoona ay ugu wacan tahay in cudurada keena xanuunada la xiriira xiniin yaha iyo guud ahaan xubnaha taran ka ragga aad u kordheen.Haddaba haddii uu jiro cudur xanuun ama barar kaa asiibay xiniin yaha isla markaana uu kuu keenay dhibaatooyin caafimaad iyo kuwo la xiriira xagga taran ka inta ba ama dhibaatooyin ka la xiriira cudurada iyo xanuunada ku dhaca xiniin yaha iyo guud ahaan xubnaha taran ka ay asiibeen qof kamida ehel kaada asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Waa maxay cudurka biijada
cudurka (Biijada) waxaa loo yaqaanaa (angular stomatitis ama angular cheilitis). hadii aan sii sharaxno waa nabro gaduudan amadilaac ama jeex jeex ku yaala geesaha faruuraha ama afka. Biijada waxaa sababa wax yaabo badan waxaana ka mid ah:1: infection nada ka yimaada cudur iyo caabuq dhaliya yaasha loo yaqaano fungi ga sida candidal iyo qaar kamida bacteria yada sida staphyloccocol. 2: dhiig la'aan ta ka timaada maadada birta oo jirka ku yaraata (iron deficiency) ama anemia. 3: vitamins yada oo jirka ka nus qaamaan gaar ahaan kuwa ( B2- riboflavin, B9-folate or B12 cobalmain). 4: caruurta waxaa iyagana ku sababi kara marka geesaha afka ee iska qaniinaan ama suulka nuugaan ama faruuraha jiid jiidaan.5: sidoo kale biijada waxaa sababi kara maadada loo yaqaano (Zinc) oo jirka ku yaraato. 6: sidoo kale waxaa jirta nooc kamida nooc yada biijada oo ay sababaan cudurada gaaska iyo qaar kamida cudur dhaliya yaasha gooryaan ka loo yaqaano. haddaba haddii aad isku aragto cudurkaan dhibaatana uu kugu hayo xal daaweyn rasmi ah na aad u weysay la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Waa maxay cudurka psoriasis
Waa maxay cudurka ”psoriasis” Psoriasis waa cudur haragga ku dhaca isla markaana qofka ku raago. Dalka sweden kaliya wuxuu cudurka psoriasis ku dhacaa dad tirodooda Ay gaareyso 250, 000 qof. Astaamaha cudurka lagu garto waxaa ka mid ah. 1: calaamado gud guduudan oo ku daboolan qolof midab keeda cad yahay. arrin taas oo ka imaaneysa nudaha hargaha oo u dhismaan hab aan caadi ahayn. 2: Calaamadaha Psoriasis waxay ka soo yaacaan haragga, hase yeeshee waxay u badan yihiin suxulka jilibka bartamaha oogada iyo maskaxda. 3: finan ka soo yaaaca haragga kil kisha gumaarka iyo saxaax da qofka oo soo guduudato. sidoo kale cudurkaan wuxuu weeraraa gacmaha lugaha cidiyaha. waxaa la aamin san yahay in cudurka psoriasis u yahay cudur hoos u dhiga wax tarka difaaca jirka. Taaso iyada na dusha ku sidata fash fash ka haragga una badan dhan ka kala goysyada. Cudurka kale ee ka dhex dhasha cudurkaan isla markaana gaar ahaan ugu dhaca kala goysyada waxaa lagu magacaabaa psoriathritis Maxaa keena cudurka psoriasis? Sababta cudurkaan keenta wali la ma yaqaano Hase yeeshee, waxaa moodaa in sinjiga (generna) uu kaalin weyn ku leeyahay abuurmidiisa. Wax yaabaha kale ee cudurka sababi kara waxaa ka mid ah qaar kamida cudur dhaliya yaasha sababa cudurada iyo sidoo kale wal wal ka iyo walaaca badan. Yuu ku dhacaa cudurka psoriasis? qof kasta iyo da’ kasta ayuu ku dhici karaa cudurka. Hase yeeshee, wuxuu badan ku dhacaa da’ yarta, kuwaa soo uu ku dhaco cudurka inta ay san dhameysan 25 sano . Xitaa carruurta wuu ku dhici karaa, laakin se ma badna oo waa dhif. Tirada dumarka iyo ragga uu cudurka Psoriasis ku dhaco waa isku mid. Ma la is qaadsiin karaa cudurka psoriasis? cudurka psoriasis la is ma qaadsiiyo. Ma la iska daaweeyn karaa cudurka psoriasis? haa bi idni llaah cudurka psoriasis waa la daaweyn karaa xarumaha caafimaad ka website kan ayaa ku guuleystay al xamdu lillaah in ay cudurkaan u helaan daaweyn rasmi ah. Waa maxay psoriathritis? Psoriathritis waa hurgun ka ama caabuqa ama infection ka ku dhaca kala goysyada oo cudurkaan sababo keeno. Qiyaastii 30% bukaanada uu ku dhaco cudurkaan waxay la kulmaaan dhibaato ka mid ah hurgunka kala goysyada seedaha iyo murqaha. calaamadaha cudur kaan waxaa kamida 1: xannuun kala goysyada ah 2: adkaasho seedaha iyo murqaha ah 3: dareemid daal badan. Dhibaatooyinka psoriathritis waxaa kale oo ka mid ah faraha cagta iyo kala goys yada faraha gacanta oo soo barrara. Waxaa kale oo caadi ahaan lagu arkaa dad ka qaba cudurkaan hurgun ka ama infection ka kala goys yada iyo laf dhabarta. Haddaba haddii aad leedahay dhibaatooyin la xiriira cudurkaan isla markaana aad kala kulantay xanuun iyo dhibaatooyin la xiriira xanuunada iyo caabuqa haragga kala goys yada walina aadan helin daaweyn rasmi ah ama uu jiro xanuun iyo cudur dhibaato kugu haya iyo dhamaan cilladaha caafimaad daro ee banii aadam ka la soo gud boonaato la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanadiin.
Stress ku ma wuxuu sababaa gaasaad ka caloosha iyo mindhicirada
Stress ka ma wuxuu keenaa Gaaska caloosha ama boogaha caloosha ee gaaska uu ku sameeyo caloosha maxaa ka jira arrintaasi ma dhab baa in nabarada gaaska ee caloosha iyo mindhicirada ba in ay ka dhashaan waxa loo yaqaano stress ka ama isku buuqnaanta ?Jawaabta su,aashan ayaa ah maya dhab ma aha in nabarada gaaska ee caloosha iyo mindhicirada ba ay ka dhashaan stress ka ama isku buuqnaanta qofka balse jawaabta saxda ah ayaa ah nabarada gaaska ee caloosha iyo mindhicirada ba waxa ay ka dhashaan marka ay u gudubto qofka isla markaana ay ku taranto caloosha qofka bacteria da loo yaqaano (helicobacter pylori) bacteria daasi ayaa sababta boogaha iyo nabraha gaaska ee caloosha iyo mindhicirada.Balse su,aasha haboon ayaa waxa ay tahay stress ka iyo isku buuqnida ma sii xumeyn karaan boogaha iyo nabraha gaasaad ka caloosha iyo mindhicirada?Jawaabta su aashan ayaa ah haa waa sii xumeyn karaan xaaladaha nabraha gaasaad ka qofkana waxa ay ka dhigi karaan kuwo sii xumaada isla markaana ku keena dhibaatooyin culus iyo xanuuno badan oo sii ziyaada.Haddaba haddii aad leedahay xanuun ka gaaska ama ay jirto bacteria da sababta nabraha iyo boogaha gaasaad ka caloosha iyo mindhicirada ama ay jiraan cuduro iyo xanuuno kale oo aad la dhibtooneyso la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa alaah mahad sanidiin.
Waa maxay cudurka dumarka ku dhaca ee vaginitis
cudurka dumarka ku dhaca ee vaginal Infection oo ah caabuqa ama infection ka ku dhaca xubin ka taran ka haween ka ee farjiga ayaa ah cudur dhib badan ku haya dumar badan isla markaana kala kulmaan dhibaatooyin badan oo isugu jira xanuuno nadaafad xumo cun cun joogta ah iyo dhibaatooyin kale sida kaadida oo dhibta kaadida oo xanuun jisa kaadida oo gubta xanuun ay kala kulmaan galmada dhibaatooyin la xiriira dhalmada iyo kuwo kale oo badan. Dhibaatooyin ka uu keeno cudurkaan ku dhaca xubin ka taran ka haweenka ee farjiga waxaa kamida. 1: Caabuq ama infection ku dhaca Hoosta Haweenka (farjiga). Caabuqa ama jeermis ku dhaca hoosta haweenka loona yaqaano(vaginitis) waa xajiin ama cun cun ku dhaca hoosta haweenka oo sababa keena isbeddelo aaney haweenta hore u lahaan jirin sida 1: dheecaan hoosta ama farjiga haweenta ka yimaada. 2: cuncun gudaha xubinka taran ka haween ka ah mar marka qaarna gudaha iyo dibada xubinka farjiga. 3: ur ka soo baxda xubin ka taran ka haweenta iyo calaamado kale. Haweenka uu ku dhaco cudurkaan badan koodu waxay leeyihiin dheecaan hoosta farjiga ka yimaada Dheecaan kaasi waxa uu hoosta haweenka ka dhigaa meel nadiif ah oo qoyan. Dheecaan ka ka yimaada haween ka qaba cudurkaan waxa uu leeyahay ur khafiif ah midab kiisuna waa saafi, cadaan ama hurdi ah. Waxa laga yaabaa inuu ku reebo kastuun ka dumarka uu ku dhacay cudurkaan midab ah hurdi marka uu ku qalalo kastuun ka. Waxa laga yaabaa in dumarka qaba cudur kaan yeeshaan dhawr maalmood oo ka soconayo dheecaan badan oo saafi ah, oo simbiriirixo leh xilliga badanaa uu ku aadan yahay na waa kala-barka caado bileed ka. Waxay tani dhacdaa marka ukun-sidaha haweenta soo daayo ukun. Calaamadaha cudurkaan waxaa kamida. dumarka uu ku dhaco cudurkaan Waxa ay yeelan karaan mid ka mid ah, ama in ka badan calaamadahan marka uu jiro caabuqa fash fashka farjiga haweenka: 1: Isbeddel ku dhaca xadiga, midabka ama urta dheecaanka farjiga haweenka 2: Cuncun ama gubasho agagaarka farjiga haweenka. 3: Kaadida oo gubta haweenta. 4: Kaadi qabashada oo soo badata 5: Nabaro ama finan ka soo baxa agagaarka daloolka farjiga. 6: Galmada oo xanuun haweenta ku qabata. 7: Qarqaryo ama qandho ay dareento haweenta. 8: Xanuun caloosha ah ama majiir caloosha ah. haddii aad leedahay mid ka mid ah calaamadahan soo socda xaalada haweenta waa qatar waxeyna u baahan tahay daaweyn deg deg ah. 1: caabuqa ama fash fash infection oo daran. 2: dhiig xagga farjiga ka yimaado oo badan 3: qandho aad u daran. 4: xanuun dhabarka iyo ubucda ah oo aad u daran. 5: wareer iyo kor olol. cudurkaan dumarka ku dhaca gaar ahaana ku dhaca xubinka taran ka haweenta ayaah cudur ay isu gudbin karaan labada is qaba ee reerka sidoo kalena wuxuu saameyn ku yeelan karaa ilmaha uurka gala kadib marka ay hooyadu qaado jeermiska keena cudurkaan balse cudurkaan ayaa ah cudur si fudud loo daaweyn karo waqti koobana la daaweynayo inshaa allaah. wax yaabaha laga doonayo in ay sameeyaan dumarka cudurkaan uu ku dhacay mar kasta waxaa kamida. 1: Qubeyso maalin kasta oo si fiican u nadiifi agagaarka farjiga. 2: Goobta ka dhig mid qalalan intii suurogal ah. 3: waa inaad isticmaashaa kastuumo. 4: Isticmaal suufka hoosta lagu xiro (sanitary pads) haddii dheecaan badan uu jiro Ha isticmaalin suufka galiska tambooniga ah (tampons) si uu u nuugo dheecaanka. 5: haweenta uu ku dhaco cudurkaan iyo seygeeda waxey u baahan yihiin daaweyn wadajir ah sababta oo ah noocyada caabuqa ama infection ka farjiga haweenka waxa la isugu gudbin karaa taabasho galmo. Haddii aad isku aragto caabuqa ama infection ka farjiga haweenka oo soo noq noqda waa inaad sameysaa talooyin kan si looga hortago soo noq noqoshada infection kaan: 1: Iska ilaali in jeermis ka ku jira saxarada in aad ku fidisid gaarsiisid farjiga meesha laga saxaroodo. 2: Kadib marka aad saxarootid masaxaada ka bilaw xagga hore oo u sii wad xagga dambe, adiga oo ka fogeynayaa xagga farjiga. 3: Si fiican u nadiifi dibnaha ama bishamaha farjiga kana dhig goobta mid qalalan intii suurtogal ah. 4: Iska ilaali saabuunaha lagu xajiimoodo, buufinta hoosta haweenka waraaqaha musqusha ee cadareysan ama suufka galiska ama tambooniga cadareysan. 5: Qalabka lidka uurka sida giraanta (diaphragm) iyo qalabka lagu mariyo alaabta dilista manida (spermicidal applicator) ku dhaq biyo kulul oo saabuun leh oo si fiican u biyo raaci.Haddaba haddii aad leedahay xanuun kan iyo dhamaan xanuunada la xiriira xubnaha taran ka rag iyo dumar ka ama aad isku aragtay calaamadaha cudurkaan ama ay jiraan xanuuno kale oo aad kala kulantay dhibaato inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah si aad u hesho talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Haa waa run buurnida xad dhaaf ka ah ayaa kuu keenaysa cuduro iyo xanuuno badan
cudurarada buurnida xad dhaaf ka ah kugu keeni karto waxaa kamida cuduro qatar ah sida dhiig kar ka wadno istaaga kansarada ku dhaca meelo badan oo jirka kamida cuduro iyo xanuuno la xiriira xameytida maqaar ka sidoo kale buurnida xad dhaaf ka waxey kugu keeni kartaa dhalmo la aan joogta ah iyo dhibaatooyin kale oo badan haddii aad leedahay buurni xad dhaaf maarana aad u weysay la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa u diyaarisay dadka ay buurnida xad dhaafka ah dhibaatada ku heyso daawooyin si fudud iyo waqti kooban ba ka saacidaaya qofka in uu dhimo buurnida xad dhaaf ka ah si uu uga caafimaado si uu uga hortago dhibaato caafimaad ama cillad ee markaa heysata ama ku imaan laheyd mustaqbal ka la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Waa maxay schizophrenia
Schizophrenia waa jirro iyo cudur aad u daran oo qofka ku keenta dheeli tirnaan la’aan sida qofka uu u fakaro, sida qofka dareen kiisa ama falal kiisa in ay ula muuq daan si ka duwan sida caadiga ah. Cudur kaan ayaa Qofka ku keenaya in uu kala kulmo dhibaato kala saaridda dhabta iyo khiyaaliga. Calaamada cudurkaan waxaa ka mid ah. 1: qofka oo maqla ama arka waxaan jirin. 2: qofka oo si joogta ah ugu maleeya in la fiirsanayo ama la daba socdo, dabeecada hiisa horena dhamaan is bedelaan isagoona qofka muujiya dabeecado aan caadi ahayn. Schizophrenia ma aha qof dhawr qof isugu jira (multiple personality) sida dad badan u haystaan sida aad ku aragto sawirka kore Sidoo kale ma aha sida dad badan u haystaan oo ah inuu qofka cudurkan qaba yahay qof gacan qaad badan (violent) sida telefishinada iyo aflaanta lagu muujiyo, runtii aad buu ugu yar yahay arrinkaasi dadka jiradan qaba balse qofka qaba cudurkaan ayaa maleeya iska dhaadhiciya ama isku arka in uu isugu jiro dhowr qof. Cilmi-baara yaasha cudurkan, waxay leeyihiin sida cudurka kansarku uu u leeyahay qaybo kala duwan ayaa jirada Schizophrenia u leedahay qaybo kala duwan, mana aha hal jiro oo qura. Badanaa jiradani waxay bilaabataa xilliyada uu qofku qaan gaarayo, cilmi baaris ayaa tilmaantay in ay dhaxaltooyo noqon karto qaadida cudurkaan. Tusaale ahaan ilmaha waalid kiisa mid ka mid ah uu qabo jiradan, waxay u badan tahay inuu 10% cudurkaan qaado marka loo barbar dhigo ilmo aysan labadiisa waalid midna qabin jiradaan 1% oo kaliya la filayo inuu qaadi karo cudurkaan. cilmi baaris cusub ayaa muujisay inay jirada tahay dheelitir la’aan dhinaca qaab dhismeedka maskaxda iyo unugyada (biochemical) dhaq dhaqaaqa kiimikada. Cilmi baara yaasha ayaa isku raacsan bii ’ada ama degaan ku inuu saamayn ku leeyahay qaadida cudurkaan. Waxyaabaha cudurkaan lagu garanayo waxaa ka mid ah: 1: delusion oo ah khiyaali aan sal lahayn oo qofku rumeeyo. 2: hallucination oo ah maqlid ama arag wax aanan jirin, ama dareemid wax aanan jirin sida gubasho, hab fakir aan fiicneyn. 3: Waxaa iyana ka mid astaamaha lagu garto qofka oo dadka ka dhexbaxa, dadka qaarna ku sanifa, bilaa sabab fal ku kicid iyo xamaasad aan sabab cad lahayn. 4. Waxaa kale oo lagu gartaa in astaama hani ka muuqdaan qofka qaba cudurkaan ugu yaraan laba asbuuc, iyadoona dadka qaarkii ee cudurkaan ku dhaca na calaamadaha ka soo muuq daan muddo lix bilood gudahooda. Wax yaabaha ay wadaagaan dad badan oo qaba cudurkaan waxaa ka mid ah: 1: Dhalanteed (wax la rumeysan yahay oo dhabtii aan jirin) 2: Isku-sawirid (hallucinations) (dareenka waxa dhacaya oo aan dhabtii jirin) 3: Fikrad aan habeysneyn oo ku saleysan dhalanteed iyo isku-sawirid wax aan jirin. 4: Dhaqan aan caadi ahayn oo ka imanaya sedexda xaaladood ee aan kor ku soo xusnay. schizophrenia waxay badanaa ku bilaaban taa si deg deg ah oo daran. schizophrenia da daran, waxa ay noqon kartaa cudur mudo dheer jira. Tiro ku dhaw 90% dadka uu ku dhacay cudurkaan markii ugu horeysay ayaa ka bogsoon doona marka laga daaweeyo Laba qodob oo muhiim ah: 1: dad badan ayaa schizophrenia ku khalda ruuxa “laba shakhsiyadood” leh (split personality) ama “shakhsiyaad badani” ku jiraan. Hase yeeshee schizophrenia waxaa loola jeedaa marka ay jiraan faraq u dhexeeya fikirka iyo dareenka, ee kuma saabsana shakhsi yadda qofka. 2: Dadka qaba schizophrenia waa dhif in ay halis iyo qatar ku noqdaan dad ka kale dadka cudurka qaba intooda badani waa dad jilicsan oo iyagu isku kooban oo ay u badan tahay in ay naftooda wax yeeleeyaan halka ay dadka kale wax yeelo u geysan lahaayeen. Dad badan ayaa sidoo kale u maleeya schizophrenia in uu ka dhasho nooc kamida nooc yada sixirka kaa soo qofka ku keena astaamo iyo calaamado la mida calaamadaha lagu arko qofka qaba cudurkaan balse cudurkaan waa cudur jira mana keeno sixir iyo wax lamida waa cudur ku dhaca maskaxda inshaa allaah na waxaa noo soo socda asbaabaha keena cudurkaan iyo macluumaad badan oo ku saabsan inshaa allaah. WAA SOCOTAA.
Waa maxay helicobacter pylori
Helicobacter pylori: waa bacteria da sababta caabuqa iyo infection ka ku dhaca caloosha iyo boogaha gaas ka caloosha guda heeda ku sameys ma. bacteria yadaan waa mida ugu badan ee dad yowga caalam ka ku keenta boogaha gaasas ka ee caloosha iyo waliba mindhicirada. Bacteria da iyo infection ka H. pylori badanaa waxaa laga qaadaa cuntooyin ka iyo biyaha wasakhey san bacteria dan ayaa ah mid qof ilaa ka qof u gudubta. bacteria dan ayaa waxa ay ku badan tahay meelaha nadaafadooda ay liidato. Wadamda nadaafadooda liidato, 90% dadka ku nool dalal kaasi cudurkaan waxa uu ku leeyahay saameyn aad u badan . Mid kamida 6 dii qof ee qaba cudurkaan ama caabuqa ay keento bacteria daan ayaa waxaa ku dhaca boog mindhicir ka qeyb tiisa hore iyo boog gaas oo ay ku sameyso caloosha. Sidoo kale bacteria dan ayaa waxaa lala xiriirinayaa kansarka ku dhaca caloosha. Si kastaba ha ahaatee haddii aad leedahay cudurka gaas ka ama ay jiraan boogo gaas oo ku sameysmay caloosha iyo mindhicirada lagaana helay caabuqa iyo infection ka bacteria da H.pylori la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Waji gabaxa reeraha dhex mara iyo dhibaatooyin ka biya baxa deg dega ee ragga
Maxaa keena biya baxa deg dega xilliga galmada (premature ejaculation) ka? Waxa xaqiiqo ah in waxkasta oo qofka ku dhacaa ay leeyihiin sabab, hadaba dhibatadan oo noqotay mid ku baahaysa dhalinyarta da, yarta ah ayaa waxaynu soo qaadan doona dhowr qodob oo ah waxyaabaha keena inuu qofku hore u biyo baxo. 1- Dhibaato nafsiyan ah (psychological factors) (personal problems) qofka oo shaqo badan haya maalintii oo dhan kadibna marka uu guriga yimaado aan ka helin haweenaydiisa soo dhawayn aad u saraysa, in qofku uu kalsooni daro ka qaado haweenaydiisa ama gabadhu ninkeeda aanay aad ugu kalsoonayn. (sexual feelings), qofka oo wakhtiga uu galmada bilaabayo dareema iskubuuq badan (excessive nervousness owing to sex). Soojeedka habeenkii oo isaguna ka mida waxyabaha keena, iyadoo loo bahanyahay qofku inuu yareeyo soo jeedka faraha badan. 2- Qofka oo ay la soo darsaan dhibaatoyin xaga jidhkisa ka imida kuwaas oo ay ka mid noqonayaan, qanjidh xanuunka (thyroid gland) xiniinta oo ku xanuunta (prostate infective diseases) iyo cudurada ku dhaca maskaxda 3- Cabida sigaarku waxay qeyb weyn ka qaadataa dhibatadan in qofku uu xajin waayo biyaha wakhtiga galmada, sababtoo ah unugyada dhiiga qaada waxay noqdaan kuwo aad u yaryar (our cells become smaller due to smoking) markuu qofku sigaarka cabo, taasoo sababta in dhiiga qofku uu xoog u shaqayn waayo (poor blood circulation). 4- Cunista qaadka, waxa laga yaaba dad badan inay is waydiiyaan waa maxay sababta cunista qaadku ay biyo baxa u keento, qaadka oo ay ku jiraan maadooyin badan oo raacsan qaybta mukhadaradka (drug additctive) qofku marka uu qaadka cuno waxa laga yaaba in hamiga uu u hayo inuu la galmoodo xaaskisu uu yahay mid aad u sareya (high capulation drive) lakin inka yar 3 daqiiqo ama 2 daqiiqo ayuu qofku ku biyo baxaa (early discharge) isagoo markiiba noqda qof hurdo hayso, taasna waxa ugu wacan cunista qaadka oo ah daroogo la dagaalamaysa jidhkena (physical and mentally problem) qofkuna aanu awoodin inuu marlabaad xaaskisa u tago. 5- arrintan oo ah tan ugu muhiimsan ee dhakhaatiirka caalamku isku raaceen inuu keeno biyo baxa deg dega ah 80% ayaa waxa loo yaqaan afka qalaad(masturbation) ama qofka oo isagu gacantiisa iskaga keena biyaha isagoo kali ah. Waxa loo yaqaano ( siigada ) Waxaana la ogaaday in dhalinyarada ay ugu wacantahay in boqolkiba 70 ay ku keento dhibatadaasi biya baxa deg dega ah marka uu qofku guursado waxa loo yaqaano siigada. Cudurada sababa biya baxa deg dega xilliga galmada waxaa ka mida. 1: cudurka baabasiirka oo ah cudur khatar ah ahna cudurka ugu horeeya ee sababa biya baxa deg dega ayaa ugu badan asbaabaha keena biya baxa deg dega ah iyadoo waliba la socdaan tabar yari xagga raganimada ah boqolkiiba 80 ayuu sababaa baabasiirku biya baxa deg dega xilliga galmada. 2: cudurka sonkorowga ayaa isaguna ah sababaha keena biya baxa deg deg ah. 3:qalliimada qaar ee lagu sameeyo xubnaha taranka ragga oo iyaguna sababa biya baxa deg dega xilliga galmadda. 4: xanuunada qaar sida infekshanada qaarkood iyo xanuunada kilyaha ku dhaca qaarkood ayaa iyaguna sababi kara biya baxa deg dega ah. 5:bixinta mid kamida xiniinyaha ragga oo iyaduna sababi karta biya baxa deg dega ah. Daaweeyn malee yahay biya baxa deg dega ah? Haa daaweyn rasmiya ayuu leeyahay si fudud ayaana looga bogsoodaa biya baxa deg dega ah inshaa allaah. La soo xiriir dhaqaatiirta webkani hadii aad isku aragto biya baxa deg dega ah ama aad isku aragto tabar yari xagga ragganimada ah iyo dhibaatoyinka guud ee la soo dersa xubnaha taranka ragga iyo dumarka ba. Dhaqaatiirtu waxey hubineysaa asbaabta ka dambeysa dhibaatada kadibna inshaa allaah daawada ku haboon ayaa laguu diyaarinayaa si fudud noogu soo gudbi hadii aad isku aragto cillad xagga raganimada ah inshaa allaah waxaan diyaar u nahay caawintaada talo iyo tusaaleyn inshaa allaah mahad sanidiin.
Nooc kamida nooc yada ugu caansan eernada
Hiatal Hernia waa nooc ka mid ah eer nooyin ka ku dhaca jirka qeyba hiisa kala duwan. Eernada ma aha cudur balse waa dabac sanaan ku timaada murqaha iyo seedaha jirka kuwaa soo darbi ahaan u shaqeeya una diida ka celiya waxa jirka ku jira in ay banaanka u soo baxaaan, soo muuqdaan ama soo kuus taan. Eernadu waxa ay ku dhacdaa meelo badan oo jirka ka tirsan waxaana ka mid ah: 1: caloosha, 2: qooraha ama xiniin yaha, 3: Xudunta iyo meelo kaleba. Eernada ku dhacda (diaphragm) ka diyaaf ragmaha (diaphragm ku waa muruqa kala teeda kala hayya caloosha iyo xabadka dhexdooda xubnaha ku jira wuxuuna ka ilaali yaa is dhex gal ka xubnaha ku kala dhex jira caloosha iyo xabad ka) waxaana eernada ku dhacda diaphragm ka loo yaqaanaa Hiatal Hernia. Eernada noocani waxay timaadaa markii qeyb ka mid ah caloosha ay u soo gudubto dhinaca xabad ka iyadoo soo dhex marta meel daloosha oo ku taala diyaaf ragmaha, daloolkan oo loo yaqaano daloolka hunguriga taas oo macna heedu tahay daloolka ay ka gudubto tubada cunto mareenka (esophagus). Daloolkan waa dalool ay mari karto tubada hunguriga kaliya lakin markii uu dabco waxa ay keeni kartaa in calooshu ay soo cadaadiso, daloolkana markaa uu weynaado kadibna caloosha dalool kaasi ka soo gudubto. Eernada diyaaf ragmaha waa xaalad caam ah oo ilaa 60% qofka ku dhici karta markii qofka da'diisa 60 sano kor u dhaafto, waxayna u qeybsantaa laba nooc: Nooc I: nooc markii caloosha uu ka yaraado cadaadiska ku soo laaba ta booskeeda, waana nooca ugu badan (95%) waxaana loo yaqaanaa(Sliding Type). Nooc II: nooc caloosha ay ka koreyso diyaaf ragmaha kuna soo laabanin booskeeda (Fixed Type). sababaha keena Eernadan. 1- Cayilka 2- Qufaca joogtada ah 3- Is cadaadin markii caloosha ku fadhido calool fadhiga (constipation) 4- Qaadis wax aad u culus 5- Dhaxal 6- Sigaar cabidda 7- Muruqa diyaaf ragmaha oo jiran. Maxaa ka mid ah calaamadaha eernada: 1- Feero xanuun ama cadaadis xagga feeraha ah. 2- Laabjeex. 3- Wax liqidda oo ku dhibta. 4- Qufac iyo saxasho ama sixasho. 5- Meesha oo soo kuusanta 6- Higgo daaweynta eernada. Dhaqaatiirta ka howl gasha website kan ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah na kaa bogsiineysa eernada meel kasta oo ay jirka kaga taalo. Dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daawo laba bilood la qaadanayo bi idnillaah na si rasmi ah u soo afjari doonta eernada iyo dhibaatooyin keeda. Balse caalamka ayaa u isticmaala daaweynta eernada qalliin oo kaliya haddaba inshaa allaah dhaqaatiirta website kan ayaa fursad kuu siisay daaweyn iyo xal ka duwan qalliin in aad isaga daaweyso eernada inshaa allaah. Daawooyin ka eernada ee dhaqaatiirtu kuu diyaarisay waxa ay kuula fal gali doontaa sidan soo socota inshaa allaah. 1: waxa ay xoojineysaa muruqii ama seedkii dabcay. 2: waxa ay yarey neysaa duleelkii weynaaday si jirka qeyba hiisa ay san iskugu gudbin. 3: waxey baabi ineysaa bi idnillaah dhamaan astaama hii iyo dhibaatooyin kii eernadu ku heysay qofka. Daaweynta kadib waxaa muhiim ah in aad sameyso arrimahan soo socda si aysan u soo laaban eernada mar kale inshaa allaah: 1- waa inaad yareysaa miisaan kaaga, kana fogow in aad yeelato culeys saaid ah ama aad qaado culeys saaid ah. 2- Iska ilaali gebi rogashada, si sax ah oo wanaagsan u fariiso. 3- samee Jimicsi joogto ah. 4- laba barkin is kor saaro marka aad seexaneyso. 5- Ka fogow cuntooyin ka leh (Kaffeyga, shukulaatada iyo cuntooyin ka dufanka leh) 6- waa inaad joojisaa sigaar cabidda, khamriga iyo isticmaal ka mukhaada raad ka. 7- Cunto badan ha cunin adigoo seexan raba. Haddaba haddii aad leedahay eerno meel kasta oo ay jirka kaga taalo laguuna sheegay in xal aan qalliin aheyn uusan jirin dhibaatooyin iyo xanuuno badana aad kala kulantay la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Inshaa allaah waa inaad hakisaa dhiciska joogtada ah
Macnaha ereyga dhicin ama dhiciska waa uurka oo si aan lama filaan ah u dhamaada iyadoo ilmuhu lumayo ka hor todobaadka 24-aad ee uurka, badanaa Qiyaastii afartii uur mid baa dhicis ku dambeeya, dhicin ta intooda badani waxa ay dhacaan inta lagu jiro 12-ka todobad ee uurka ugu horeeya. Xaaladaha qaarkood waxa dhacda inaan haweenaydu aanay marnaba ka warqabin in ay uur leedahay, waxaana laga yaabaa in ay yeelato caado raagtay, marmarka qaarkood na caado aad u daran ama aanay caado gafin ba. Dumar badan waxaa calaamadaha u horeeya ee dhicinta u ah dhiig ama dheecaan hoos ka yimaada, kaa soo mar marka qaar kood uu u wehliyo xanuun caloosha waa xudunta hoosteeda ee ama dhabarka ah oo u eg xanuunka caadada. Dhiigga hoos ka yimaada marka uurku bilawga yahay waxaa la dhahaa halis dhicin, qasabna ma aha inuu isu bedelo dhicin dhab ah. Dumar badan oo isku arka dhiig xaggooda hoose ka yimaada ayaa uur koodu noqon doonaa mid caadi ah. Waxa laga yaabaa in dumar badani ay arkaan calaamado sida lallabo ama naaso xanuun oo muddo kadib iska taga, haddii uu dhiig jiro iyo haddii kaleba. Kuwo kale waxa laga yaabaa in aanay isku arag dhiig ama calaamad kale midna ayagoon dareen ka qabin in wax khaldan yihiin, iyo in kale laakiin waxay ogaadaan muddo kadib in uurkoodi dhamaaday kaddib marka la sameeyo sawir caadi ah oo loogu tala galay ultrasound. taana waxaa lagu magacaa baa dhicin la gafay ama daahday. Haddii xanuunka calooshu yahay mid aad u daran, kulul ama hal dhinac ah, waxa laga yaabaa in taasi calaamad u tahay uur ku sameysmay meel ilmo galeenka ka baxsan (ectopic pregnancy). Taasi waa xaalad halis galin karta nolosha haweenta waana in isla markiiba deg deg xarunta caafimaad ka loo tagaa. Sababaha.Haweenka intooda badani ma helaan sababta keentay dhicintooda, sababta ayaana ah waxaa dhif ah in la baadho iyada oo haweentu uu ku dhaco dhicin ah saddex ama in ka badan. sababaha muhiimka ah ee sababa in haweenta dhiciso waxaa ka mida: 1: sabab la xiriirta Hidde : qiyaastii kala bar dhamaan dhicinta uurka hore sababta ay u dhacaan waxaa waaye suuro galka caadi la’aan koroomosoom Yada ah (chromosomal abnormalities). 2: Sabab la xiriirta hormoonada haweenka: haweenka leh isbed bedalada hormoonada (hormonal irregularities) waxey ka mid tahay asbaabaha ugu badan ee sababa dhiciska waxaana laga yaabaa in ay ku sii adkaato uur yeelashada, marka ay uur yeeshaana waxa ay u badan tahay in ay dhiciyaan. 3: sabab la xiriirta hab difaaceed ka haweenta (immunological): cudurada khafiifka ah sida hargabka ma laha dhib, laakiin qandho ama xumad aad u sareysa iyo cuduro gaar ah qaarkood, sida jadeecada jarmalka (Rubella), waxay keeni karaan dhicin. 4: Sabab la xiriirta jirka haweenta (anatomical): haddii afka ilmo-galeen ku dafiic yahay, waxaa laga yaabaa inuu bilaabo furitaan oo uu furmo marka ilmo galeen ku sii cuslaado xilliga dambe ee uurka waxaana laga yaabaa in taasi goor dambe keento dhicin. Ilmo galeen aan qaab kiisu caadi ahayn waxa uu keeni karaa in aanu jirin meel ku filan koritaanka ilmaha. Burooyinka waaweyni waxay keeni karaan dhicin xilliga dambe ee uurka. 5: sabab la xiriirta Borootiin la' aan: waxaa loo maleynayaa in la’aanta borootiinta (Macrophage inhibitory cytokine 1) ay door ka ciyaarto dhicinta. Cilad-sheegid Sawirka sanqadha adeegsada (ultrasound) ayaa ah habka ugu kalsoonida badan ee lagu garan karo dhicinta, laakiin baaritaan ka uurka (dhiig ama kaadi) iyo baaritaan jireed ayaa ah habab kale oo lagu garto waxa dhacay. Waxa laga yaabaa in baari taan ka guriga lagu sameeyo uu muujiyo uur dhawr cisho ka dib marka dhicintu dhacdo kaddib. 6: sabab la xiriirta cuduro ayaa iyadana kamida asbaabaha keena dhiciska ama dhicinta uurka. Cuduradaasi waxaa kamida. 1: cudurka infection ka. Infection nada kala ah Listera monocytogenes. Toxoplasma gondii. Parvovirus B19. herpes simplex. Lymphocytic choriomeningitis virus Dhamaan cudurada iyo infection nada aan kor ku soo sheegnay waxey sababi karaan dhiciska dumarka ku yimaada. Sidoo kale waxaa kamida cudurada sababa dhicinta. Thyroid disease. Polycystic ovary syndrome iyo xaalad kale oo lagu magacaabo. Leuteal phase defect. Sidoo kale cudurada sababa dhiciska waxaa ka mida. 1: cudurka baabasiirka. 2: cudurka sonkorowga. 3: cudurka dhiig karka. 4: cudurada ka dhasha stress ka wal wal ka walaaca iyo isku buuq naanta. 5: isticmaal ka mukhaadaraad ka sida khamriga sigaar ka qaad ka iyo mukhaada raad yada kaleba. Cudurada sababa dhiciska waxaa ka mida oo haweenka ku dhaca. Cudurada la yiraahdo collagen vascular diseases waxaana kamida. 1: systemic lupus erythematosus. 2: antiphospholipid antibody syndrome. Sidoo kale sababaha dhicinta uurka waxaa kamida dhaxal haweenta ay ka dhaxasho waalidiin teeda sidoo kale asbaabaha ugu badan ee dhicinta uurka haweenka dhiciyaan waxaa sababta bahasha loo yaqaano umul sabiyaanta oo ah iyada naag jin ah oo haweenka u gasha gudaha riximka isla markaana soo laada ilmaha uurka ku jira. Si kastaba ha ahaatee haween badan oo ku dhaqan caalamka ayaa umuurtan dhicinta ilmaha ku sababtay gablan iyo iney waayaan dhamaan ubadkii calooshooda ku beermay qaar kale ayaa iyagana sidoo kale ku waayey ubad badan kalana kulmay dhibaatooyin xanuuno iyo dhiig bax qaar kale ayaa iyaguna ku waayay ubadkii caloosha ay ku sideen iyo naftoodii ba kadib dhibaatooyin xanuun iyo dhiig bax. Dumarka somalida ayaa iyaguna kamida dumarka ay heysato dhibaatadan dhiciska. 15 ilaa 20 % dumarka uurka yeesha waa ay dhiciyaan sababo la xiriirta umuuraha aan kor ku soo sheegnay. Sidoo kale dumarka uurka yeesha isla markaana uurkooda dhameystira oo aan dhicin uurka si caadi ah na u dhala balse ilamaha dhala iyagoo meyd ah dhintay ayaa iyaguna waxaa lagu tiriyaa in ay kamid tahay mowduucan dhicinta ah.Haddaba haddii aad leedahay dhibaato la xiriirta dhicinta ilmaha uurka ku jira iyo guud ahaan dhibaatooyin ka la xiriira xagga taran ka sida dhalmo la,aanta iyo guud ahaan ba haddii ay jiraan xanuuno iyo cuduro dhib iyo caqabadana aad kala kulantay una weysay daryeel iyo daaweyn ba La soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawooyin rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Ma waxaad tahay qof xanuun san inshaa allaah ha wel welin waxa ku hayaa waa hal cudur
Ma waxaa tahay qof xanuun san ma waxaa jira xanuun ama xanuuno badan oo noloshaada caafimaad kaada iyo jirkaaga ba saameeyay dhibaatooyin badana aad kala kulantay ma dhici kartaa in aad leedahay calaamada haan iyo cillada haan soo socda? 1: daal fara badan 2: madax xanuun 3: caajis joogta ah 4: kor bur bur ama kor jajab joogta ah 5: murqo xanuun lafo xanuun margiyaha oo ku xanuuna 6: xanuun iyo muruq garbaha hoos tooda kaaga taagan 7: gaas joogto ah 8: calool fadhi calool istaag joogta ah 9:kor xanuun joogta ah. 10: wareer 11. dhabar xanuun 12: xanuun xudunta hoosteeda miskaha iyo wareega ubucda iyo dhabarka oo dhan badanaa dumarka 13: xaglo xanuun xaglaha oo ku soo kaga 14: tabar yari iyo hoos u dhac guud ahaan jirkaaga ah 15: goo go id iyo daadasho timaha oo zaaid ah 16: dibiro aad aragto mararka qaarkood ama joogto ah 17: hurdo xumo hurdo la aan 18: dhiig yari anemia 19: kor olol korka oo aad ka dareento kuleyl gubasho joogto ah 20: caga olol cagaha oo aad ka dareento gubasho ama kuleyl 21: ma waxaad leedahay kubuubyo lugaha gacmaha ama meelo kaleba DADKA QAARKII WAXEY LAHAAN KARAAN ASTAAMAHAN SOO SOCDA. 22: ilko xanuun cirid xanuun ilkaha oo madoobaada isla markaana bur bura cirid ka oo dhiiga iyo hawo qurmuun oo afka ka soo baxda daaco badan. DUMARKA WAXA AY LAHAAN KARAAN ASTAAMAHAAN SOO SOCDA. 23: xanuun xagga caadada ah socod ka caadada oo yaraada ama socod ka caadada oo ziyaado noqda caado wareer oo ah caadada oo marna timaada marna la waayo oo aan la helin waqtigii ay imaan jirtay ama gebi ahaan ba caadada oo la waayo muddo badan iyadoona haweentu gaarin da,da quusta. 24: aaryo caloosha ku wareegata iyo casiraad joogta ah. 25: dibiro marka caadada soo dhaw dahay marka caadada joogto iyo kadib marka ay dhamaato 26: uur beenaad haweenta oo isku aragta marar ka qaarkood calaamadaha iyo astaamaha uurka lagu garto oo dhan oo ay kamid tahay dhaqaaq gudaha calooshooda ah iyo caloosha oo soo weynaata sida marka haweenta uur leedahay muddo kadib na uurkii iska baaba,o oo noqda mid dhalan teed ah. 27: dareen ah xilliga caadada in naasaha haweenta noqdaan kuwo caano qaad ah oo ay karaan isla mar kaana xanuunaan. 28: bog xanuun joogta ah bogga oo ku xanuuna ama sida dadkeena somalida u taqaano beer xanuun inta badan la dareemo. 29: cunto xumo joogta ah qaaada shada cuntada oo aad kuu dhibta cuntada oo aadan qaadan karin ama marka aad cuntada cunto oo aad dareento xanuun. 30: wadno garaac badan wadnaha oo aad kuu garaaca ama gariir wadnaha ah 31:. Naxdin badan ama naxdin joogta ah inta badan ama mararka qaar kood oo aad naxdo. 32: cun cun iyo mad madow aga gaarka indhaha sida xiribaha. 33: timaha oo gurma gurmida iyo goo go, idda timaha oo zaaid noqota gaar ahaan xilliga shanleysiga dumarka ayeyna ku badan tahay. 34: xubno kamida jirkaaga oo aad qiyaaseyso in hilibka ka dhamaaday sida lugaha hoose sida anqow yada ama lafaha gacmaha. 35: maskax xanuun joogto ah 36: dulqaad yari iyo xanaaq badan oo aadan lahaan jirin 37: cun cun dabada meesha saxarada ka timaado ah 38: saxarada oo aad ku aragto dhiig yar oo dhinac ka heysta. 39: dhidid la aan dhidid ka oo kugu yar 40: qar qaryo aad dareento xiliyada galabkii iyo aroortii. 40: oodimo kugu taagan inta badan 41: wahsi badan 42: hilmaan badan 43: jirka dhan oo noqda mid danqada oo bislaada 44: aragtida indhaha oo naaqus ku timaada ama indhaha oo yeesha hilib badan iyo indhaha oo caad fuula. RAGGA WAXAA DHEERI KU AH 45: hamiga iyo dareen ka ragganimada oo hoos u dhaca. 46: xubin ka taran ka ragga oo yaraada iyo mid kamida xiniin yaha oo yaraata. 47: biya bax deg deg ah xilliga galmada. 48: shahwada ninka oo is bedel ku dhaca sida in ay noqoto biyo biyo iyo in tirada noola yaasha shahwada ku jiraan yaradaan iyo hakad ku yimaada dhalmada ninka iyo guud ahaan dhalmo la aan. DUMARKA WAXAA DHEERAAD KU AH 49: dheecaan cad oo leh ur aan wanaag saneyn oo ka yimaada farjiga. Ur aan wanaag saneyn oo ka timaada Farjiga xiliga galmada. Hamiga iyo dareen ka jinsiga haweenta oo hoos u dhaca iyo xanuun ay dareento xilliga galmada. 50: Burooyin haweenta kaga dhaca makaanka iyo khal khal ku dhaca hormoonada haweenta sidoo kale haweenta oo ay ku dhacaan dhibaatooyin la xiriira ukxanta dumarka sida ukxan sidaha fiixda leh unug yada endometriosis iyo howl gabka ukxanta dumarka cuduradaan ku dhaca ukxanta dumarka ayaa keena dhibaatooyin kala duduwan oo ay kamid tahay dhibaato caafimaad darro ah iyo mid dhalmo la aaneed. WAXAA SUURA GAL AH KADIB MARKA AAD ISKU ARAGTAY QEYBO KA MIDA XANUUNADAN IYO CALAAMADAHAN KADIB IN AY KUGU DHACEEN QAAR KAMIDA CUDURADAAN SOO SOCDA. 51: DHIIG KARKA 52: DHAG XAANTA KILYAHA 53: CUDURKA SANBOORKA 54: CUDURADA SUUSKA AFKA IYO YIRID KA 55: sidoo kale dadka qaba cudurkaan waxey isku arkayaan cudurka infection ka ee kilyaha iyo kaadi mareen ka oo badanaa joogto ah sida kaadida oo ku gubta kaadida oo aad xanuun ka dareento kaadida oo aadan celin karin sida haddii suulliga lagaaga hormaro ama meel suuliga ka dheer aad joogto. Sidoo kale dadka qaba cudur kaan waxaa ay arki karaan barar lugaha hoose ah siiba dumarka. Dadka qaar kiisa ayaa lahaan kara qufac xabad xanuun iyo guud ahaan raaxo la,aan joogta ah. qasab maha in dhamaan dadka qaba cudur kaani dhamaan tood isku arkaan ama ay wada lahaa daan cilladaha iyo calaamadaha cudurkaan oo dhan qaar dadka kamida ayaa lahaan kara dhamaan cilladaha iyo calaamadaha cudur kaan qaar kale ayaa lahaan kara qeybo kamida calaamadaha iyo cilladaha uu keeno cudur kaan. Haddaba haddii aad isku aragto ama aaad leedahay dhamaan ama qaar kamida calaamada haan iyo cillada haan la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah ogowna cudur kaan ma aha cudur fudud wax yeela diisuna sahlan tahay balse waa cudur kala dhan taala nolosha iyo mustaqbal ka caafimaad ka qofka reer ka iyo awlaadaba waayo cudur kaani waa cudur la isu gudbiyo waana cudur la kala dhaxlo haddii aad adiga kaliya qabto saameyn tiisa waxey gaari kartaa qoys kaada oo dhan sida xaaska iyo caruurta cudur kaani waa qatar wax yeeladiisa iyo saameyn tiisa balse waa cudur si fudud loo daaweyn karo inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah inshaa allaah mahad sanidiin.
Cudurka sababa dillaaca dabada ee anal fissure
Le ragadi anali Ama "Anal Fissure" waa xanuun shabaha Baabasiirta, laakin waxaa lagu kala soocaa dhowr arrimood oo ay ku la duwan yihiin. "Anal Fissure" waa dilaac ku dhacay maqaarka dabada sida aad ku aragto muuqaal ka sare kaa soo keenaya xanuun aad u daran marka la saxaroodo kadib iyo dhiig bax. Dhaawacaan wuxuu ka dhashaa badanaa markii qofku isku dayo inuu soo saaro saxaro aad u adag, taa soo keeneysa in si dhib ah ay ku soo baxdo iyadoo dhaawac gaar siisa maqaarka dabada eeg muuqaal ka sare. Dhaawacaan oo u diida qofka inuu saxaroodo maadaama uu wato xanuun aad u daran, iyo dhiig badan oo aad gaduud u ah isla markaana ah dhiig fresh ah arrin taas oo qofka badanaa u maleeyo in ay heyso baabasiir balse labada cudur ee anal fissure iyo baabasiirka ayaa kala ah laba cudur oo kala duwan si kastaba ha ahaatee haddii aad leedahay dhibaatooyin la xiriirta cudurkaan ama cuduro kale daryeel iyo daaweyn na aad u weysay la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriirr dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
FIIX AMA BURO KAMIDA BUROOYIN KA CUNAHA KA SOO BAXA
Waa maxay thyroglossal cyst?Thyroglossal cyst waa fiix ama buro kamida burooyin ka ka soo baxa cunaha fiixdan ama buradan waxa ay ka soo baxdaa cunaha halka loo yaqaano (thyroglossal duct)buradan throglossal cyst ma aha burooyin ka ama qanjirada caadiga ah ee cunaha ka soo baxa haddana iskooda ku baaba, a buradan sababta keenta in ay cunaha ku sameysanto waa dhibaato ka jirta qanjirka lagu magaacbo thyroid gland oo ku yaala dhuunta qeybteeda hoose iyo xaalad kale oo iyadana ku dhacda isla qanjir kaasi thyroid ka oo lagu magacaabo(ectopic thyroid tissue)dhaqaatiirta chemicals ka wax ku daaweysa waxey u adeeg sadaan Buradaani qalliin balse dhaqaatiirta ka howl gasha website kan ayaa kuu diyaarisay daawo muddo gaaban kaaga bogsiineysa buradaan iyo dhamaan xanuunada kaaga dhacay qanjirka tyroid ka ee sabab u noqota in ay sameysanto buradaani bi idnillaah.Inta badan fiixdani malaha xanuun waana jilic san tahay marka gacanta lagu taabto haddiise wax yeelo gaarto buradaani sida in wax kaaga dhaco ama cunaha oo infection ama caabuq ku dhaco markaa waxaa dhici karta in ay xanuun keento.Calaamadaha fiixdan lagu garto.1: dhibaato ay ku keento qofka xagga neef sashada.2: dhibaato ay ku keento qofka xagga wax liqida.3:dibiro caloosha ah4: dadka qaarkiisa ayaa lahaan kara cunaha oo xanuuna.Fiixdan ayaa mararka qaarkood sameysa dhaq dhaqaaq iyadoona la dhaq dhaqaaqda la sameysa carabka dhaqaaqid waxaana ay u yara dhaqaaq daa dhanka sare ee dhuunta.Si kastaba ha ahaatee haddii aad leedahay buradan oo kale iyo guud ahaan burooyin ka cunaha ka soo baxa iyo dhamaan jirkaba la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah oo bur burineysa buradaan dibna u soo laabaneyn bi idnillaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
CUDURKA BEER XANUUNKA EE HEPATITIS-B
Hepatitis B waa cudur xun kana dhasha fayrus ka infection ka darani gaarsiiya beerka. Macnaha infection darani waa infection cusub. Infection ka Hepatitis B ga daran marar ka qaarkood waxaa uu keenaa infection raaga infection ka raaga ee beerka waxaa loo yaqaanaa hepatitis B (sidoo kalena loogu yeedho marxaladda sidaha). In ka badan 90% ilmaha yar yar ka ah iyo in ka badan 50% carruurta waaweyni , iyo 5% dadka waayeelka ee qaba hepatitis B ga daran waxa uu ku noqdaa mid raaga ama infection muddo dheer socda. Kiisaska qaarkood, hepatitis B ga daran waxaa uu keeni karaa cudurrada beerka oo ay ku jiraan cudurada kala ah 1: cirrhosis 2: kansarka (burada) beerka gasha. Tallaalka hepatitis B waxaa heli kara da’ walba si looga hortago infection ka hepatitis B. CALAAMAADKA Caadiyan calaamadaha cudurkaan waxaa la gartaa 6 usbuuc ilaa 6 bilood kaddib marka uu fayrus ka soo gaaro qofka (qiyaastii 2 bilood ka hor soo if bixidda calaamadaha) Calaamadaha Dadka waaweyn, waxaa ka mid ah. 1: lalabo 2: caloosha oo kacsan upset stomach 3: cunno xumo 4:matag 5:daal 6: calool xanuun. 7: Kaadi huruud ah ama maariin ah 8: saxaro midab keedu cad yahay 9: shuban 10: cagaar show (indhaha ama jidhka oo huruud ama cagaar noqda ayaa laga yaabaa in lagu arko. Dadka qaba infection ka hepatitis B waxa ay wada lahaan karaan calaamadaha dhammaan tood ama qaar ka mid ah ama wax calaamado ah ma lahaan karaan. Ku dhawaad dhallaanka oo idil iyo carruurta waaweyn iyo 50% wayeelka qaba infection ka daran (cusub) maba lahan wax calaamado ah haba yaraate. Muddada uu cudurka soconayo waa ay kala duwan tahay, dadka badankiis waa ay ka bog soodaan muddo 3 usbuuc gudahood. HEPATITIS B GU MA FAAFAA? Fayrus ka waxaa uu ku nool yahay beerka waxaana uu ku jiraa dhiigga iyo dheecaannada jidhka qaarkood. Faafidda waxaa ay dhacdaa marka la taabto dhiigga ama dheecaannada jidhka uu fayruska ku jiro, sida wadaagidda irbadaha la isku duro, falalka isutaga ragga iyo dumarka xilliga dhalashada canugga, alaab la wadaagidda qof qaba hepatitis B, iyo wadaagidda qalabka nadaafadda (sida cidiyo jarka, sakiinta, cadayga). Tiro ahaan fayrus ka waxa uu ku badan yahay dhiigga iyo dheecaannada nabarrada ka soo baxa, balse waxaa uu sidoo kale ku jiraa isagoo yar shahwada ragga dheecaanada dumarka ee farjiga, iyo caadada dumarka. Inkastoo tiro yar oo fayrus ka laga heli karo calyada, candhuufta balse uma badna in calyadu ay faafiso hepatitis B, waa haddii uusan qofka infection ka qaba marka af wax ku goosashada uu dhaawac ka soo gaaro. Hepatitis B kuma faafo dhunkashada iyo hindhisada. GARASHADA CUDURKAAN Hepatitis B waxaa lagu gartaa baaritaan dhiig oo qofka laga qaado. WAA MAXAY WAX YAABAHA AY TAHAY IN LAGA FOGAADO? 1: Kafogow khamriga. 2: sigaar cabidda 3:dhamaan mukhaada raadka oo dhan DAAWEYNTA. ha wel welin haddii uu ku haleelay cudur kaan dhibaato caafimaad daro oo weyna kugu keenay isla markaana aad tahay qof xanuun san dhaqaatiirta website kan ayaa kuu diyaarisay daawo rasmi ah oo kaa bogsiineysa cudurkaan bi idnillaah La soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan si aad u hesho daaweyn rasmi ah inshaa allaah dhaqaatiirta ayaa kuu daaweyn fudud isla markaana qaadaneysa waqti kooban inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
XIRMIDDA TUUBOOYINKA MAKAANKA DUMARKA
Ma waxaa jirto dhibaato kaa heysata xagga dhalmada iyo taranka tuubooyin ka makaanka miyaa ku xiran Dhaqaatiirta ma waxey kuu sheegeen in lagu qali doono si loo furo tuubooyin ka makaanka ee xiranMa waxaad leedahay howl gabka ukxanta dumarka ku dhacdaDhaqaatiirta ma waxey kuu sheegeen in aadan dhali karin sababo la xiriira cudurada ku dhaca makaanka dumarka iyo sababo la xiriira tuubooyin ka makaanka oo xiran iyo howl gab la xiriira xagga ukxantaadaMa waxaad leedahay dhibaatooyin xagga hormoonada ah.Sawirka kore waa ultrasound wuxuuna kuu muujinayaa dhan ka bidix waxaad ku arki kartaa mid ka mida tuubooyin ka makaanka oo ah caadi waxba aan qabin isla markaana furan oo aan xirneyn.Midig waxaad ku arki kartaa mid kamida tuubooyin ka makaanka oo xiran isla markaana aan shaqeynaynin.Sababaha keena xaaladahaan waa badan yihiin balse waxaa ugu caansan caabuq yada iyo hurgunada ku dhaca makaanka iyo guud ahaan xubnaha taran ka iyo khal khal ku dhaca hormoonada haweenta.Si kasta ba ha ahaatee haddii aad leedahay dhibaatooyin xagga taran ka guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa haatan aanu ka soo hadal nay la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta waxey ku leeyihiin u kaadi hana gelin qalliin kaliya waxaas u baahan tahay laba bilood oo aad daawo qaadato inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
WAA MAXAY HIRSUTISM
hirsutism waa xaalad uu keeno cudur ku dhaca haweenka loona yaqaano ukxan sidaha fiixda leh ama polycystic ovary syndrome loona soo gaabiyo (pcos)Hirsutism oo ah xaalad uu dumarka qaarkood ku keeno cudurkaan ukxan sidaha fiixda leh ayaa dumarka qaar ee xaaladaani la soo daristo ayaa waxaa ku dhacda in timaha jirkooda ku yaala ziyaadaan isla markaana timo kale oo dheeraad ah si khaldan uga soo baxaan meelaha ay kamid ka yihiin wajiga xabadka naasaha garka garbaha iyo lugaha.Sababta keenta cudurkaani ayaa ah khal khal iyo howl gab ku yimaada hormoonada haweenta khaasatan marka uu hoos u dhaco (luteinising hormone)Marka uu ku dhaco haweenta khal khal iyo howlgab xagga hormoonada ah ayaa waxaa ku dhaca cudurkaan ukxan sidaha fiixda leh haddii aan waqti hore laga daaweynin na waxaa ku imaan karaan xaaladahaan soo socda.1: buurni siyaada ah2: dhalmo la aan joogta ah3: finan iyo nabro wajiga ka soo baxa4: timaha jirka haweenta oo si xad dhaaf ah u soo baxaan iyo waliba timo khaldan oo ka soo baxa meelo aan wanaagsaneyn sida wajiga garka xabadka naasaha iyo garbaha lugaha iyo meelo kale oo badan sidoo kale waxaa dhacda dumarka xaaladaani la soo daristo in timo dheeri ah kaga soo baxaan meelaha aan soo tilmaanay dhan kalena sida ragga bidaar na gasho.Haddaba haddii aad leedahay dhibaatooyin guud ahaan la xiriira Xubnaha taran ka guud ahaan iyo gaar ahaan cudurada la xiriira hormoonada iyo guud ahaan cillado iyo caafimaad daro kula soo darsay la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
DHAAWACA CARJAWDA JILIBKA
Meniscus tear waa dillaac ku dhaca carjawda jilibka, waana dhaawaca ugu badan ee jilibka soo gaara. Carjawda Meniscus waxay ka caawisaa jilibka in si miisaaman u shaqeeyo, culeeskana ka yareeyo jilibka. Dillaaca carjawda waxay jilibka u diidaa in si sax ah uu u shaqeeyo. Badanaa dillaaca wuxuu dhashaa markii jilibka si lama filaan uu u wiliqsamo ama culees xad dhaaf ah aad qaado. mar kasta oo qofka weynaado wuxuu halis ugu jiraa in carjawda jilibka ay dillaacdo. Haddii dillaaca uu yahay mid yar waxaad daremeysaa xanuun iyo barar kaa soo iska baaba'o laba usbuuc illaa 3 usbuuc. Haddii uu dillaaca dhex dhexaad yahay xanuunka wuxuu daran yahay zaaid noqdaa maalinta labaad ama sedexaad wuxuuna xanuunka yaraadaa 1 ilaa 2 usbuuc kadib laakiin wuu soo laa laabtaa haddii dillaaca aan la saxin qofkana wuxu dareemaa xanuun aad moodo in wax jilibka kaa muday, dhaq dhaqaaqana wuxuu noqdaa mid xadidan xanuun ka jilibka aawgii. Hadduu dilaaca daran yahay meesha kama dhaqaaqi karo qofka jilibkana wuxuu noqdaa mid takaateysan xanuun badanna wuu keenaa. Dillaaca miniskaska waxaa lagu arki karaa baaritaanka loo yaqaano (MRI) xalka arrintaani waxay ku xiran tahay sida uu u dilaacay ama u jeexmay miniskaska jilibka iyo da'da aad jirto. Haddii dillaaca uu yahay mid yar oo uu qofku ka bogsoon karo waxaa lagu la taliyaa inuu nasto, lugtana la duubo iyo inuu sameeyo jimicsi fudud. Haddii xaalku noqdo mid xun daaweynta waqtigeedana laga dib dhacay dillaaca na uu noqdo mid xumaaday oo aan helin daaweyn deg deg ah waxaa lagu sameeyaa jilib ka qalliin lagu saxo dillaaca. Mustaqbalka jilibkaaga wuxuu ku xiran yahay dhaawaca gaara jilibka iyo daaweyn rasmi ah oo aad hesho waayo jilibka wuxuu ka mid yahay xubnaha xanuuna dooda soo noq noqdaan iyo xubnaha si sahlan wax ku noqda ama ku dhaawac ma. Haddaba haddii aad isku aragtay jilib xanuun jilibka oo ku barara xanuun ka iyo barar ka jilibka na yihiin kuwo markasta soo noq noqda ama uu jiro nooc kasta oo jilba xanuun ah ama jilbaha kaa gaareen dhaawac fudud iyo mid culus ama waqti hore ku gaartay jug iyo wixii lamid ah la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah dhamaan xanuunada iyo wax yeelooyin ka gaara iyo cudurada ku dhaca jilbaha dhamaan inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin
WAA MAXAY SOO DHAADHICIDDA MAKAANKA DUMARKA
Waa maxay soo dhaa dhicidda makaanka dumarka? Soo dhaa dhicidda makaanka ama waxa loo yaqaanno (Uterine Prolapse) waa xaalad makaanka uu ka soo durqo booskiisii lagu yaqaanay una soo dhaadhaco hoos isagoo ka soo muuqan karo xubinta dhalmada ee haweenka farjiga Waa xaalad makaanka dumarka dibadda u soo baxo. Haddii makaanka uu soo muuqdo uuna soo gaarin farjiga haweenta waxaa loo yaqaanaa soo bixid aan dhameystirneen laakiin waxaa dhici karta in uu soo wada baxo uuna noqdo mid dhameestiran. Maxaan dareemi karaa ama dareemi doonaa? Badanaa xaaladaha sahlan ee makaan soo dhaca haweenka wax calaamado iskuma arkaan inkastoo qaarka kalane ay dareemi karaan calaamadahaan hoos ku xusan: 1: cadaadis iyo culeys miskaha ah 2: Xanuun dhabarka iyo caloosha qeybteeda hoose waa ubucda iyo xudunta hoosteeda . 3: Xanuun waqtiga galmada 4: Caabuq iyo hurgun ama infection kaadi heysta iyo guud ahaan kaadi mareen ka ah oo soo noq noqda 5: dheecaan iyo qoyaano ka imaanaya farjiga haweenta 6: Saxaro adeyg 7: Xanuun xagga kaadida marka haweenta kaadinayso 8: Kaadida oo kaa baxsata ama deg deg siinyo xagga kaadida ah Maxaa keeno soo dhicidda makaanka? Makaanka waxaa ku hayo booskiisa murqo iyo seedo xoog badan oo ilaah ugu talo galay, wuxuuna soo bixi karaa kaliya marka ay ku timaado dabac sanaan murqaha iyo seedaha makaanka ku hayya booskiisa taa soo keeni karto in ay sii xajin waayaan makaanka uuna hoos u soo laa laad samo: 1: Duqoobista waxay keentaa murqo dabac sanaan jirka oo dhan taa soo ay ku jirto murqaha xajiya makaanka 2: Dhaawac gaaro haweenta xilliga dhalmada (waliba haweenka dhasha badan ama kuwa dhalay ilmo waaweyn macnaha ilmaha ka weyn 3 kilo xilliga la dhalayo) 3: Wax yaabo kaalmeyn kara in murqaha dabcaan makaanka ama riximka na hoos dibadda farjiga u soo dhaa dhaco sida 1: Cayilka 2: Qufaca 3: Jiirashada. Yuu ku dhacaa soo dhicidda makaanka? cilladahaani Waxa ay ku badan yihiin haweenka dhasha badan ama haweenta dhalmo deys ka ah arrimahan oo ka dhalasha markii ugxan sidaha uu hawl gabo isagoo joojiyo soo deynta hormoonka Istirojiin (estrogen) oo xoojiyo murqaha makaanka. Ma badan tahay cilladaan? Aad uma badno laakiin waxuu qofka jaanis ka in cilladaan ku dhacdo siyaadaa markasta oo ay da'diisa kororto. Sidee lagu ogaadaa soo dhicidda makaanka? Waxaad ku garan gartaa 3 qaabood oo kala ah 1: in aad isku aragto dhamaan calaamadaha aan kor ku soo xusnay 2: in aad aragto makaanka oo dibadda u soo baxa ama soo gala farjida 3: in dhakhtarka sameeyaa baarid miskeed isagoo dareemi karo inta uu soo baxsan yahay makaanka. Sidee loo daaweeyaa soo dhicidda makaanka? Daaweynta waxaa loo kala qaadaa 1: daaweyn aan aheyn qalliin 2: daaweyn qalliin la adeegsanayo iyadoo ay ku xirantahay heerka uu gaarsiisan yahay soo dhaadhicidda makaanka. Daaweynta aan qalliinka aheyn 1: daaweyn rasmi ah iyadoona daawo loo qaadanayo muddo 2 bilood oo xiriirta ah inshaa allaah 2: Jimicsi: waxaa jiro jimicsi loogu tala galay adkeynta murqaha miskaha oo lagu magacaabo (Kegel Excercise) kani wuxuu noqon karaa daawo kaliya markii ay xaaladdu tahay mid sahlan sida soo dhicid aan dhameys tirneen (Sida loo sameeyo jimicsi gaan waxaan uga hadli doonnaa qoraal kale inshaa allaah) 3: Qalab ka sameysan cinjir oo lagu taageero makaanka surkiisa si uusan u soo dhicin, waa qalab joogto loo gashanayo, si joogto ahna loo nadiifinayo waana in la iska siibaa ka hor mar kasta oo la sameynayo galmo. 4: Haweenka dhalmo deyska ah waxaa la siiyaa hormoon maadaama uu ka maqan yahay hormoonkii aan kor ku soo xusnay. Daaweynta qalliinka ah 1: Saarista makaanka waxaa la sameeyaa markii makaanka oo idil ka soo baxo booskiisa. (uur iyo dhalid ma jiri doonto haddii la bixiyo makaanka) 2: Minka oo lagu celiyo booskiisa iyadoo la adkeynayo seedahiisa laguna qabanayo qalab loogu tala galay. waa maxay dhibaatada ay keeni karto soo dhaadhicida makaanka? Haddii aan la daaweyn waxay dhibaato iyo carqaladeyn ku keeni kartaa 1: kaadinta 2: saxaro dhigidda 3: galmada. 4: dhalmada Ma laga hortagi karaa soo dhaadhicidda makaanka? Waxaa jirto dhawr tillaabo oo haddii aad sameyso iska yareyn kartid khatarta cudurkaan: 1: Culeyskaaga oo aad xakameyso 2: Samey jimicsi joogto ah 'Kegel Excercise' 3: Cun cunno isku dheeli tiran. 4: Jooji sigaar cabidda 5:Haddii aad dhalmo deys tahay oo aad waqtiga dhalmada ka baxday waa inaad daawooyin hormoona daada kor u soo qaada isticmaashaa daawoyin kaasna waxaad soo weydiisaan xaruntan taqasusiga ah inshaa allaah. 6: Ha qaadin culeys xad dhaaf ah leh 7: Haddii aad leedahay qufac joogto ah iska daaweey waxey sabab u noqon kartaa asbaabaha cilladaan keeni karta. Si kasta ha ahaatee xaaladaan iyo cilladaan haweenka kala soo darista makaanka ayaa ah cillad iyo xaalad keenta ama sababta dhibaatooyin badan sida xanuun dhalmo la aan iyo kuwo kaloo badan haddaba haddii aad leedahay dhibaatooyin la xiriira makaanka ama riximka ama guud ahaan cudurada la xiriira xubnaha taranka ama uu jiro cudur iyo xanuun kula darisay ama cillad aadan hore u lahaan jirin la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaale caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
CUDUR KU DHACA LABADA IS QABA ISLA MARKAANA KU SABABA IN AY KU TIMAADO XAALAD AH DHALMO LA,AAN
Waxaa jirta xaalad ku dhacda ama cudur ku dhaca labada is qaba kaa soo ninka ku keena in ay gebi ahaan ba meesha ka baxaan oo la waayo noola yaasha ku jira shahwada raga noola yaa shaas oo ah iyagu kuwo la aan tood aysan suura gal aheyn in ninka ragga wax dhalo sidoo kale cudurkaan isaguna waa cudur ku dhaca qeybo kamida makaanka ama riximka haweenta wuxuu inta badan saameeyaa caabuqa iyo hurgun ka ka dhasha cudur kaan tubooyinka makaanka dumarka meeshaasi oo ah halka uu ka dhaco fal galka abuurmida ilmaha marka ay kulmaan labada is qaba marka halkaan sawirka hoose waxaad ku arki kartaa caabuq iyo hurgun ama infection saameyay mid kamida tuubooyin ka makaanka iyo muuqaal ah shahwada ragga oo aan laheyn wax noolayaasha shahwada ku jira ah ama noola yaasha ku jira ay yihiin kuwo yar iyadoona la rabo in ay ku jiraan shahwada caafimaad ka qabta in ku dhow 15-20 milyan oo noola yaasha shahwada ku jira ah jiritaan ka cudurkaan ee labada is qabta ayaa la macna ah in ay soo wajaheyso dhalmo la aan joogta ah taa soo kamid ah dhibaatooyin maanta qoysas badan heysata umuurtan ayaa ah mid si fudud loo daaweyn karo iyadoona daaweynta qaadaneyso muddo aad u yar laakiin waxaa muhiim ah in qoysaska is qaba haddii aysan helin wax ubad ah muddo laba sano ah in ay raadiyaan xal daaweyn oo rasmi ah sidoo kale xaaladahaan uu keeno cudurkaan ayaa la soo gudboonaan kara dad hore wax u dhalay oo ma aha kaliya in uu abaarayo dadka aan wax dhalin haddaba haddii ay jiraan dhibaatooyin kaa heysta xagga taranka ama uu jiro xanuun iyo cuduro la xiriira xagga taran ka la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta webkani waxa ay u diyaariyeen dadka ka cabanaya dhibaatooyin ka xagga taran ka daaweyn rasmi ah dhaqaatiirta ayaa idiin ballan qaadeysa daaweyn gaar ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daaweyn rasmi ah talo iyo tusaale caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
NOOC YADA UU U KALA BAXO CUDURKA PEPTIC ULCER DISEASE (PUD)
Waa maxay peptic ulcer disease (PUD) waa imisa nooc imisa meel oo jirka kamida ayuu ku dhacaa waa maxay farqiga u dhaxeeya peptic ulcer disease iyo gaaska peptic ulcer maku dhici karaa meelo ka baxsan caloosha iyo mindhicirada waa maxay calaamadaha lagu garto peptic ulcer disease suuragal ma tahay in cudurkaani saameeyo meelo badan oo ka mida caloosha iyo waliba mindhicirada cudurkaani xagee laga qaadaa ma waxaa jirto cudur keena yaal kala duwan oo sababa in qof ka uu ku dhaco cudurka peptic ulcer disease cudurkaani daawo ma leeyahay dhamaan su aalahan iyo dhamaan wixii macluumaad ee ku saabsan xanuunadiina soo weydiiya dhaqaatiirta ka howgsha website kan la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daaweyn rasmi ah macluumaad talo iyo tusaale caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
MID KAMIDA XANUUNADA KU DHACA MAKAANKA DUMARKA
ma leedahay xanuun dhabarka hoose ah xanuun kaasina ma wuxuu kugu siyaadaa xiliga caadada ma waxaad leedahay dhiig caado oo soo noq noqda ma jiraa dhiig aad aragto caadooyin ka dhexdooda ma leedahay xanuun xudunta hoosteeda ah xanuun kana makugu siyaadaa xiliga caadada ma waxaad leedahay lalabo mantag iyo dibiro xilliyada qaar ma dareentaa qar qaryo waqtiyada qaar sida aroortiiMa waxaad leedahay dheecaan cad lehna ur aan wanaagsaneyn oo ka imaanaya xubinka taranka dumarkaXanuun miyaa dareentaa xiliga galmada aad ku gudo jirto galmada kadib ma dhiig ayaad isku aragtaa ma waxaa jira ur siyaada ah oo aad ka dareento xubinka taranka xiliga galmada kilyaha maku xanuunaanDhibaato miyaad ku qabtaa qaadista uurka haddiise aad uur yeelato miyaad dhicisaa ma waxaad dareemaysaa dhibaato ah in dhalmadaada hakad ku yimid ama waxaad dareemaysaa dhalmo la aan xanuunadaan iyo cilladahaan iyo dhamaan calaamooyin kaan ma waxaad isku aragtay kadib marka lagu guursaday usbuucyo bilooyin ama sanado kadib haddaba haddii sidaa si tahay waxa aad qabtaa xanuun kamida xanuunada ku dhaca makaanka ama riximka dumarka xanuun kan waa xanuun si fudud loo daaweyn karo inshaa allaah balse haddii uu raago ama aan la daaweynin wuxuu haweenta ku keeni karaa caafimaad darro culus oo sabab u noqon karta geeri ku timaada qofka qaba. la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah inshaa allaah macluumaad talo iyo tusaale caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
WAA MAXAY TROPICANA SLIM
TROPICANA SLIM WAA SOKOR LOOGU TALA GALEY INEY ISTICMAALAAN DADKA QABA CUDURKA SOKOROWGA TROPICANA SLIM WAA ( LOW CALORIE SWEETENER ) MA LAHA WAX DHIBAATO AH OO AY KEENAYSO WAXAA ISTICMAALI KARA QOF KASTA OO QABA CUDURKA SONKOROWGA GUDAHA BUKISKA WAXAA KU JIRTA 50 BAAKADO OO YAR YAR AH 1 BAAKAD WAXAA KU JIRTA 2.5g OO AH (SUGAR SUBSTITUTE) 1 SACHET EE 2.5g WUXUU U DHIGMAA XAGGA DHADHANKA MACAANKA 10g OO AH DHADHANKA MACAANKA AY LEEDAHAY SOKORTA CAADIGA AH. SIDAASI AAWGEED WAA SOKOR LEH DHADHANKA MACAANKA SOKORTA CAADIGA AH HADDANA AANAN LAHEYN WAX DHIBAATO OO AY KU KEENAYSO DADKA QABA CUDURKA MACAANKA. WAXAAD KA HELI KARTAA DHAMAAN SUPER MARKET YADA CAALAMKA OO DHAN.
WAA MAXAY BARAS AMA VITILIGO
baraska waa cudur ku dhaca oogada sare ee maqaarka qofka uu ku dhaco cudurkaani ayaa waaya midabka caadiga ah ee oogada sare wuxuuna isu bedalaa midabka qofka cadaan aan wax midab laheyn. Baraska ayaa ku bilowda si tartiiba isagoona ka soo bilowda badanaa faraha gacmaha lugaha wejiga wuxuuna ku fidaa jirka oo dhan haddii aan la daaweyn ama aan la joojinin ffiditaankiisa. Sababta keenta in qofka uu ku dhaco cudurkaan baraska ayaa ah markii ay dhintaan unug yada qaabilsan midabeynta oogada sare ee jirka unug yadaasi waxaa loo yaqaanaa (melanocytes). Lama garanayo ilaa hadda asbaabta rasmiga ee keenaysa dhimashada unug yadaani iyo guud ahaan sabaabta keenaysa baraska. Baraska malaha dhibaato kale oo caafimaad aan ka aheyn dhibaatada midab la aanta. Baraska kuma fido macaamilada caadiga sida taabashada salaanta wax kala iibsiga wada hadalka iyo in hal meel la wada fadhiisto. Baraska wuxuu u kala baxaa 2 nooc. 1: nooc marka cirbad lagu duro uu ka soo baxo dhiig noocani waa nooca ugu sahlan xagga daaweynta. 2: nooc marka la duro uu ka soo baxo dheecaan cad noocani waa nooca ugu dhibka badan daaweynta baraska. Si kastaba ha ahaatee daaweynta cudurka baraska ayaa ah mid aad u fudud iyadoona la daaweynayo muddo gaaban inshaa allaah. Haddaba la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan si aad u hesho daawo rasmi inshaa allaah dhaqaatiirta ayaa gacan kaa siineysa daaweynta iyo guud ahaan xaaladaada caafimaad la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah si aad u hesho talooyin caafimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
WAA MAXAY ALBINISM
ALBINISM WAA XAALAD NUQSAAN OO DADKA QAARKII AY KU DHASHAAN CUDURKAANI ALBINSM WUXUU U EGYAHAY LANA MOODAA IN QOFKA QABA INUU KU DHACAY CUDURKA BARASKA LOO YAQAANO BALSE CUDURKAANI AMA XAALADAANI ALBINISM KA AYAA KA DUWAN CUDURKA BARASKA. INTA BADAN WAA ISKU MUUQAAL DADKA QABA CUDURKAANI ALBINISM KA IYO DADKA QABA CUDURKA BARASKA WAXEYNA KA WADA SIMAN YIHIIN IN LABADUBA AY LEEYIHIIN CALAALAMAD AH IN JIRKOODA UUSAN LAHEYN MIDABKA OOGADA MAQAARKA BALSE WAXEY KU KALA GEDISAN YIHIIN CUDURKA ALBINISM KA WAXAA SABABTAY IN QOFKA QABAA UUSAN LAHEYN OO ALLE UBA SAMEYNIN UNUGYADA JIRKA BANII AADAMKA U QAABILSAN INEY MIDABEEYAAN OOGADA SARE EE JIRKA BANII AADAMKA. HALKA CUDURKA BARASKANA QOFKA UU KU DHACO MACNAHEEDU TAHAY IN QOFKA AY KA DHINTAAN UNUGYADA JIRKA BANII AADAMKA U QAABILSAN MIDABEYNTA OOGADA LOONA YAQAANO (MILANOCYTES) KA
QANJIRKA PROSTATE KA OO NORMAL AH CAAFIMAAD QABA
IYO QANJIRKA PROSTATE KA OO JIRRAN OO KA WEYNAADAY CABIRKIISA CAADIGA AHAA MAXAA KEENA MAXAA U SABAB AH INUU WEYNAADO MAXAA CALAAMADO AH OO LAGU GARTAA SIDEESE LOO DAAWEYN KARAA DHAMAAN SOO WEYDII DHAQAATIIRTA WEBSITE KAN.
dhamaan saaxiibadeena qaaliga ahow maanta waxaan halkaan idiin kugu soo gudbinayaa warbixin gaaban oo ku saabsan xanuunka yiridka loo yaqaano. yiridka waxaa loo yaqaanaa ( Gingivits) waa xanuun ka bilowda afka kadibna wuxuu saameeya ciridka ilkaha quumanka dhuunta hunguriga tuubada dheer ee hunguriga caloosha ugu dambeyntana wuxuu saameeyaa beerka. Noolaha sababa infection ka iyo xanuunka loo yaqaano ( Gingivits) waa nooc kamida waxa loo yaqaaano fungi ama ( fungus) waxaa jirta bacteria qaabilsan ka ilaalinta fungiga inuu u gudbo afka iyo gudaha jirkaba dhowr arrin sababteed ayaa waxaa dhacda in bacteria daasi meesha ka baxdo sida marka qofka qaato dawooyinka antibiotics ka ama hoos u dhac ku yimaada nidaamka difaaca jirka banii aadamka ha noqoto sabab cudur ama mid nafaqo la aaneed ba marka bacteria daasi meesha ka baxdo noolahani waxaa u suurta gasha in uu si fudud ku galo afka halkaana ay ka bilaabato waxyeeladiisa infection ka. Calaamadaha lagu garto xanuunkan waxaa ka mida. 1:gowsaha oo madoo baada 2:ciridka oo dhiiga sida marka qofka ilkaha cadeysanayo. 3:ilkaha iyo gawsaha oo jilca lig ligasho. 4:wax cad ama jaalle ah oo carabka kaa fuula lana moodo huuro mana aha. 5:dhaawac kaa saameeya ciridka quumanka ilaa dhuunta. 6: af ur afka oo laga dareemo riix aan wanaagsaneyn. 7:laqidda oo ku dhibta marka aad wax cuneyso. 8: gaas aad dareento mar mar 9: muruq. Garbaha hoostooda ah 10: xabad xanuun. xabadka oo ku xanuuna hadaba xanuunkan yuu ku dhici karaa? Xanuun kan wuxuu ku dhici karaa qofkasta oo ay u soo baxeen ilkaha dambe ee soo baxa marka ay dhacaan ilka caanoodka rag iyo dumar qof weyn iyo mid yar ba. Xanuun kan sidoo kale wuxuu ku dhici karaa dadka qaba ama ku imaan karaa dadka qaba xanuunadan soo socda. 1: cudurka sokorowga 2: cudurka baabasiirka 3: gooryaanada. Dadka qaba gooryaanada qaarkood 4: dadka uu ku dhaco cudurada difaaca jirka hoos u dhiga sida ( HIV ) ga iyo cancer ka. Xanuun kan maleeyahy daaweeyn? Haa inshaa allaah xanuun kan daawo la hubo wax tarkeeda ayuu leeyahay daawada xanuun kan waxaa la qaataa muddo bil ah 30 maalmood. Waxaana laga qaataa afka. Daawada waxey sameynaysaa marka hore. 1: iney nadiifiso afka guud ahaan 2: iney baabi iso dhaawaca afka dhan. 3: waxey joojiney saa ciridka oo dhiiga 4: waxey adkeynay saa ilkaha dhamaan 5: waxey ka baabi ineysaa ilkaha madow gii ku dhashay. 6: waxey ilkaha ka soo dhiseysaa salka hoose ee ciridka. 7: gebi ahaan ba waxey ka taqaluseysaa noolaha sababey xanuunkan. 8: waxey nafaqeynaysaa ilkaha oo daawada waxaa ku jirta maadada (calcium) ka oo iyadu xoojisa lafaha guud ahaan. Sidoo kale daawada waxaa ku jira vitamin c oo xanuunada ilkaha iyo ciridka ba wax badan ka caawiya iyo guud ahaan ba jirka oo dhan. Daawada malaha wax dhibaato ah oo lagala kulmayo isticmaalkeeda waxaad isticmaali kartaa adiga oo wadanaya howlahaaga shaqo cuntooyinkaagii caadiga ahaa dhamaan. kaliya waxaa lagaa reebayaa mudadaasi bisha ah ee aad daawada qaadaneyso inaad sameyso ( xirriir jinsiyeed ) tani waxey caawineysaa habsami u shaqeynta daawada Daawada waxaa la diyaarinayaa marka lagaa helo dhamaan wixii war bixin ku saabsan xaaladahaaga caafimaad sida. 1:da daada 2: xanuunka aad dareemayso. 3: xanuuno kale hadii ay jiraan adiga iyo waalid kaaga xanuunada ay qabi karaan. 4: daawooyinka iyo cuntada wixii aad allergy ku tahay. 5: iyo inta waqti ah ee xanuun kan ku hayey. 6: iyo inta sano ee aad jirto iyo miisaan kaada inta uu yahay. Dhamaan arrimahan ogaansha hooda waxey qeyb weyn ka qaadanayaan in laguu diyaariyo daawo safe ah kuna haboon xanuun kaada inshaa allaah. Sidoo kale intaad daawooyin ka isticmaaleyso waxaa lagaa reebayaa wixii kuu daran iyo wixii daawada u daran ba. Inshaa allaah si laguu caawiyo wax badana aad u ogaato la soo xiriir dhaqaatiirta page kan ka howl gasha. Waxaan kuu ballan qaadeynaa inshaa allaah adeeg nadiif ah iyo amaano. Daawada waxaa laguu gu soo gaarsiin karaa qaabab badan oo ay ka mid tahay boostada (post) (D.H.L) PARCELS meel kastoo aad joogto. ( EEG PEGE KA NALA SOO XIRIIR ) Mahad sanidiin.
WAA MAXAY VARICOCELE
VARICOCELE WAA XAALAD XIDIDADA AROORIYAYAASHA XINIINYAHA WEYNAADAAN IYAGOONA HAKAD GELIYA QULQULKA DHIIGA XIDIDADA UU KU DHACO VARICOCELE KA BOQOLKIIBA SAGAASHAN VARICOCELE KA WUXUU KA SOO MUUQDAA XINIINTA BIDIXDA AH VARICOCELE MACNAHEEDU WAXAA WEEYE XAALAD KU DHACDA XIDIDADA SPEMATIC CORD KA LOO YAQAAN EE XINIINYAHA XIDIDADAA OO NOQDA KU BALLAARTA OO WAASAC NOQDA MARKAANA WAXAA DHACDA IN QUL QULKII DHIIGA EE XIDIDADAASI HAKAD GALO. VARICOCELE WUXUU SABABAA DHALMO LA AANTA RAGGA KU TIMAADA BOQOLKIIBA 40 SABABTA AYAANA AH IN RUUXA AY KU DHACDO CILLADAAN VARICOCELE AAN LAGA HELAYNIN SHAHWADIISA NOOLAYAASHA SHAHWADA KU JIRA EE IYAGU AH FURAHA IN RAGGU WAX DHALO. INTA BADAN DHAQAATIIRTA MAANTA JOOGTA AYAA U ADEEGSATA XAALADAN INEY KU DAAWEEYAAN QALIIN LAGU SAMEEYO XINIIN YAHA TAASOO AY KA DHALAN KARTO DHIBAATOOYIN DIB DAMBE KA YIMAADA. VARICOCELE WAXAA SABABA CUDURO DHOWR AH IYO SIDOO KALE WAXAA JIRTA ASBAABO HADII QOFKA UU SAMEEYO KU IMAAN KARO VARICOCELE. INSHAA ALLAAH DAAWEYN RASMI AH OO KAA CIRIBTIREYSA VARICOCELE AYAAN U DIYAARINAY DADKA UU HALEELO CUDURKAAN HADABA SI AAD WAX BADAN UGA OGAATO WAXA UU YAHAY VARICOCELE WAXA KEENA IYO DHIBAATOOYINKIISA UNA HESHO DAAWEYN RASMI AH OO KAA BOGSIISA VARICOCOELE LA SOO XIRIIR DHAQAATIIRTA KA HOWL GASHA WEBSITE KAN DHAQAATIIRTA AYAA KAA CAAWIN DOONTA SIDAAD KU HELI LAHEYD DAAWEYNTA CILLADAAN MAHAD SANIDIIN.
KOOBAABINTA SARE WAA NOOLAYAASHA KU JIRA SHAHWO CAAFIMAAD QABTO OO BACRIMIN KARTA UKXANTA DUMARKA
KOOBAABINTA HOOSE WAA NOOLAYAASHA KU JIRA SHAHWO JIRRAN KANA TIMID JIR XANUUNSAN WAXAA JIRA XANUUNO BADAN OO QAARKOODA LA SAHASHADO BALSE KEENA AMA SABABA INEY YARAADAAN NOOLAYAASHA KU JIRA SHAHWADA NINKA YARAANTA NOOLAYAASHA SHAHWADA KU JIRA AYAA LA MACNO AH IN NINKU AWOODI KARI WAAYO INUU BACRIMIYO UKXANTA DUMARKA TAANA WAXEY KU KEENI KARTAA NINKA DHALMO LA AAN JOOGTA AH IYADOONA MEESHA AY KU JIRTO QADARTII ALLE HADANA CUDURADA IYO XANUUNADA QAARKOOD IYO ASBAABO KALEBA WAXEY RAGGA DHAXAL SIIYAAN DHALMO LA AAN SIDAA AAWGEED HADII AAD TABANEYSO CILLAD DHANKA DHALMADA IYO GUUD AHAAN CAAFIMAADKAADA BA LA SOO XIRIIR DHAQAATIIRTA KA HOWLGASHA WEBSITE KAN SI WAX BADAN LAGAAGA CAAWIYO LAGUUNA DAAWEEYO INSHAA ALLAAH.
UGXANTA SARE WAA UKUMAHA DUMARKA CAAFIMAADKA QABA
UGXANTA HOOSE WAA MARKA DUMARKA UKUMAHA KAGA SOO BAXAAN FIIXDA MAXAA KEENA CALAAMADAHA LAGU GARTO MAXAA KA MIDA UKUMAHA FIIXDA LEH DUMARKA MAKA HOR ISTAAGAAN DHALMADA SIEE LOO DAAWEYNAYAA DHAMAAN SOO WEYDI DHAQAATIIRTA WEBSITE KAN
Dadka soomaalida ayaa ka heysta fikrad qaldan waxaa uu yahay cudurkani oo aaminsan in qofkii ay xoogaa dabeecadiisu ama la dhaqankiisa dadka wax si ka noqdaan in uu qabo isfiilito, dadka qaarkiisa ayaaba u arka faan oo kugu oranaya war ninyahow isfiilito ayaan qabaa oo markii qof ila hadloba gacanta ayaa iga soo horeysa, hadaba arintu sidaa ma ahan cudurkana waa mid khatar ah oo ay tahay in ALLAAH laga magan galaa. Mar hadii aynu aragnay warbixinahaas ku saabsan cudurka waraabowga, fikrada qaldan ee dadkeenu ka aaminsan yahay, miyaysan nala gudbooneyn in aan wax ka niraahno waxa uu yahay cudurkani, Bagteeriyada keenta, maraaxisha uu maro bukaha qaba cudurkani, qaababka loo baaro iyo siyaabaha loo daaweyo cudurka waraabowga (syphilis). Cudurka waraabowga (syphilis) waxaa sababa nooc ka mid bagteeriyada ka mid ah oo loom yaqaan Treponema pallidum. Cudurkan waxaa lagu kalan qaadaa 1- Galmada 2- Hooyada cudurka qabtaana waxay u gudbin kartaa ilamaheeda 3- sidoo kale waxaa jermiska cudurkan keena la isugu gudbin karaa qofka oo si kama ama kas ah u taabta nabraha ama boogaha ka soo baxa bukaha qaba cudurkan, si kastaba ha ahaatee 90% cudurkan waxaa lagu qaadaa galmada. Cudurka waraabowga (syphilis) waxaa u maraa sadex marxaladood oo kala duwan lehna sifooyin iyo calaamooyin kala gaar ah , hadii aan la daaweyn dhibanaha cudurkan qaba waxaa dhacda in uu u nafwaayo cudurkan dartiis, bal aan mid mid u eegno marxaladaha uu maro bukaha cudurkan qabaa iyo calaamadaha u gaarka ah marxalad walba. MARXALADA KOWAAD EE WARAABOWGA (Primary Syphilis). Maraxaladan oo ah marka ugu horeysa ee uu dhibanuhu cudurkan qaado ka dib marka uu la galmooday buke cudurka qaba, in ka badan 95% dadka uu cudurkani ku dhaco ayaa waxaa ay muujiyaan Nabar adag oo aan xanuun laheyn oo ka soo baxa xubinta taranka ee raga ama dumarka, nabarka noocan ah ayaa waxaa loo yaqaan 'nabarkii adkaa" (HARD CHANCRE), sidoo kale waxaa suura gal ah in uu nabarkani ka soo baxo oogada sare ee xiniinyaha (scurutum), labada dibnood ee xubinta taranka dumarka (labia), malawadka (rectum), faraha iyo afka. Nabarkan waxa la arkaa mudo u dhexaysa 10 ilaa 90 maalmood laga soo bilaabo maalinta ugu horeysa ee uu bukuhu qaado bagteeriyada sababta cudurkan. Narbarkan ayaa ku baaba�a asbuuc gudihiis hadii uu bukuhu helo daaweynta ku haboon, hadii kalena waxaa uu u qarsoomaa si tartiib tartiib ah oo inta badan qaadata 4 ilaa 12 asbuuc, taas macnaheedu ma ahan in cudurkani intaas ku dhamaaday balse waxaaba dhacda in xaaladu intaas ka sii cakiranto, waayo bagteeriyada cudurkan keenta ayaa waxa ay raacdaa dhiiga dabadeedna dhibaateysa nudayaal (tissues) kale taas oo u dalacda marxalada labaad ee cudurka waraabowga. Baaritaanka cudurka waraabowga ee marxalada kowaad ayaa waxaa asal u ah dheecaan (malax) laga soo qaado nabarka oo lagu eego nuur gaar ah oo weyneyaha ka mid ah loona yaqaan Darka "field Microscopy", sidoo kale dhiiga (serum) ayaa loo adeegsan karaa baarista cudurka waraabowga in kastoo 25% jawaabta baaristu noqoto mid "negative" ah marka la joogo marxalada koowaad. MARXALADA LABAAD EE WARAABOWGA (Secondary Syphilis):- Marxlaada labaad ayaa timaada ka dib marka ay bagteeriyada cudurkan keentaa raacdo dhiiga saameyna ku yeelato xubna badan oo jirka ka mid ah (systemic infection), waana ka dib marka ay doorsadaan nabaradii ka soo baxay xubnaha taranka marka la joogay marxalada kowaad (after healing of chancre lesions), waxaana dhacda in ay nabaradani sii muuqdaan marka la joogo marxaladan waase arin naadir ah. In uusan bukuhu gelin marxalada labaad ee waraabowga ayaa waxa ay ku xiran tahay: Hadba sida loo daaweyo marxalada kowaad. Awooda ama itaalka difaaceed ee jirka bukaha. Sidaas darteed uma badna in uu bukuhu galo marxalada labaad haddii labadaas qodob la helo. Calaamadaha marxalada labaad ayaa ah kuwa la arko 6 asbuuc ama dhowr bilood ka dib laga soo bilaabo xiligii uu bukuhu cudurkan qaaday. calaamadaha marxalada labaad ayaa waxaa ka mid ah furuuruc iyo nabaro yaryar oo ka soo yaaca oogada sare ee maqaarka gaarka ahaan Adimada, sakaarka, calaacalaha, cagaha hoostooda iyo wajiga, furuuracan ayaa waxaa dhacda in ay mararka qaarkood dilaacaan oo isu bedelaan nabar weyn (ulcer). Hadii ay madaxa ka soo baxaana sababa qofka in ay timuhu ka daataan si ku meel gaar ah (temporary alopecia), sidoo kale furuuracan iyo nabaradan ayaa waxa y ka soo yaacaan xuubka gudaha kaga dahaaran marinka saxarada (Anus) iyo dibnaha xubinta taranka dumarka (labia) iyo waliba afka iyo carabka. Ogow bukuha cudurkan qabaa waxaa uu cudarka si aad ah u gudbin karaa marka uu ku jiro marxalada kowaad iyo labaad. Cudurkan ayaa waxaa la arkaa in uu ku ekaado marka nabarada iyo furuuruca marxalada labaad doorsadaan bagteeriyada cudurkan keentaana dhimato, waxaase dhacda mararka qaarkood in qaar ka mid ah jeermiska cudurkan keena ku haraan jirka oo halkaas ku noolaadaan mudo ka badan labo sano hadhowna sababaan in ay mar labaad nabaradii iyo furuuricii soo ragaal celiyaan MARXALADA SEDEXAAD EE CUDURKA WARAABOWGA (Tertiary or late Syphilis) :- Marxalada sadexaad ayaa ah mid soo daahirta sanado badan ka dib waana marxalada ugu khatarsan ee cudurka waraabowga waayo waxaa ay saameyn xun ku yeelataa xubnaha maamula shaqada jirka sida habdhiska dareenwadka (Neurosyphilis), habdhiska dheeg wareega (Cardiovascular). Lafaha iyo xubna kale oo nabaro waaweyni ka soo baxaan nabaradaas oo loo yaqaan GUMMAS. Marxaladan ayaa inta badan ku timaada xasaasiyad (hypersensitivity) ay keento duxda oogada sare kaaga dahaaran bagteeriyda Treponema pallidum, taas oo macnaheedu tahay in aan jeermis nool laga helin nabarada iyo boogaha ka soo baxa bukaha xiligan. BAARISTA CUDURKA WARAABOWGA (Diagnosis of Syphilis). Baarista cudurkan ayaa waxaa loo kala qaadaa sadex qeybood oo kala ah In si toos ah weyneeye loogu bagteeriyada cudurkan keenta, iyadoo la adeegsanayo dheecaan laga soo qaaday nabarada iyo furuuraca marxalada kowaad iyo labaad. In la abuuro oo la koriyo bagteeriyada cudurkan keenta. In borotiinada ama walxaha kiimikaad (Antigens) ee ay ka sameysan tahay bagteeriyadan laga baaro dhiiga (serum) Marka aan ka hadleyno qodobka kowaad bagteeriyada Treponema pallidum oo ah mid aad u dhuuban oo u egg tin isku maroorsan aysan suuragal aheyn in lagu eego weynayayaasha caadiga ah (compound microscopy) sidaa darted waxaa lamu huraan noqotay in loo isticmaalo weyneeye gaar ah oo loo yaqaan Dark field microscopy. Hadaan u soo gudubno qodobka labaad abuurista (culture) Abuurista Bagteeriyada cudurkan keenta ayaan ka suuro geli Karin sheybaarada caadiga ah sababtuna waxa ay tahay bagteeriyadan ayaan ku korin nafaqooyinka (media) ay noocyada kale ee bagteeriyada ku koraan sidaa darteed waxa ay u baahan tahay qalab iyo xanaaneyn gaar, taas ayaa keentay in aan inta badan abuur bagteeriyadan ah lagu sameyn sheybaarada caadiga ah. Qeybta sadexaad ee baarista cudurka waraabowga ayaa ah mid muhiim ah gaar ahaan marka la joogo marxalada labaad iyo mida sadexaad. Baarista noocan ah waxaa loo yaqaan serology waxa la raadinaaya ama la baarayaa ma ahan bagteeriyadii oo nool balse waxaan dhiiga (serum) bukaha laga baarayaa walxo ka mid isku jirada ay bagteeriyadan ka sameysan tahay ama ay soo deyso loona yaqaan antijiin (Antigens), inta badana waxaa la isticmaalaa walxo kiimakaad oo la fagalgala antijiinka bagteeriyadan dabadeedna sameya fagal kiimikaad oo isha lagu arki karo. Hadaba walxaha kiimikaad ee loo isticmaalo baarista cudurkan ee la falgala antijiinka bagteeriyad cudurkan keenta ayaa loo kala saaraa laba qeybood oo kala ah. kuwa aan gaar u aheyn antijiinka bagteeriyadan (non specific treponemal test) waana kuwa ugu badan ee loo isticmaalo baarista guud ee cudurka (screening purposes) inta badana waxaa lagu taliyaa in aan jawaabtooda oo kaliya lagu egaan (waa hadii ay Posative jawaab ah tusaan) ee la isticmaalo kuwa aan numberka soo socdo ku sheegi doono. Kiimikada noocan ah ee ugu caansan ayaa waxaa ka mid ah � VDRL ( vinereal disease reseach laboratory) � RPR (rapid plasma regain) � TRUST (toluidine red unhealed serum test) kuwa u gaar ah oo si toos ah ula falgala antijiinka bagteeriyada Treponema pallidum (specific Treponema tests) inta badan waxaa loo adeegsadaa in lagu hubiyo bukaha tusiya jawaab posative ah marla la adeegsado kiimikaalka aan gaarka aheyn ee aan ku kusoo xusnay. Kiimikada noocan ayaa waxaa ka mid � TPHA ( Treponema pallidum heamagglumation assay) � TPPA (Treponema pallidum particle agglutination assay ) � IC (Immunochromatographic) � FTA-ABS (fluoresecent Treponemal antibody absorption test).
Marka aad cudur sanbab qabtid, kiishashka hawada ee sanbabada ayaa waxaa ka buuxsama jeermis ama xab. Cudurka sanbabka waxaa keena bakteeriyo, fayras ama kiimiko. Badanaa qofna qof kale uma gudbiyo. Calaamadaha cudurka sanbabka (Pneumonia) • U neefsashada si ka dhakhsa badan sida caadiga ah ama dhibaato neefsashada qofka kaga timaadda • Laab xanuun marka la neefsanayo ama la qufacayo • Qufac xab leh oo laga yaabo inuu yahay jaalle, cagaar ama midab daxal/mirir • Qandho • Qar-qaryo ama gariirid • Dhididid • Faruuryaha ama ciddyaha oo buluug noqda (cyanosis) Talooyinka la gudboon qofka xanuunkan qaba. • Wixii xab ah ee aad soo qufacdo Ha liqin. • Badanaaba naso. • Cab 8 koob ama ka badan oo cabitaanno ah maalin walba. • Cunto caafimaad leh cun. • Sigaar ha cabin. Hadii aad isku aragto xaalad deg deg ah sida haddii: • Ay dhibaato kaaga timaaddo neefsashada • Aad isku aragto qandho ama qandhadaadu ay jireyso wax ka badan 1-2 maalmood • Aad isku aragto jahawareer • Aad isku aragto feero xanuun kugu soo kordhaya • Aad isku aragto lalabbo ama matagid Iyo dhamaan ba xanuunkan oof wareen ka ah wax ka mida calaamadihiisa si deg deg ah noola soo xiriir si aan kuu caawino. Daawada xanuun kan waxaa la qaataa muddo 20 beri ah inshaa allaah waxaan kuu heynaa daawo la hubo wax tarkeeda dhibaata na laheyn. kala soo xariir dhaqaatiirta ka howl gasha webkaan daawooyin wax tarkooda la hubo talo iyo tusaale caafimaad amaano iyo adeeg nadiif ah mahad sanidiin.
Af-qurunka ama waxa loo yaqaanno "Halitosis" waa xaalad qofku ka soo saarayo afkiisa hawo uraysa, taasoo ka duwan af-urka subaxii lala soo tooso, kaasoo ku baab'a nadiifinta ilkaha. Af- qurunka ma laha wax xuduud ah, umana kala soocno dadka da'dooda, noocooda iyo xaaladooda iyo dhaqaalaba, intaa waxaa sii dheer in af-qurunku u keeno qofka niyad jab aad u daran taasoo keenaysa in qofku ka fogaado dadka iyo la hadlakoodaba, xitaa uusan u sheeganin dhibaatadiisa dhakhaatiirta. Badanaa niyad jabkaan waxay ka dhalata in dadka qaba af-qurunka aysan dareemi karin dhibaatada haysata illaa ay ka ogaadaan dad kale. kadibne ay keenayso in ay ka go'aan bulshahda kana doorbidaan kalinimada. Maxaa keeno af-qurunka? Waxaa loo kala qaadaa sababha keeno af-qurunka laba qeybood oo kala ah: 1: Caafimaad darro ka baxsan ilkaha. 2:Infekshan ama caabuq ku dhaca jeebabka sanka iyo afka u dhaxeeyo (Sinusitis) ama qalad ka jira qaab- dhismeedka lafta oo qofku ku dhashay. - Qooman - Sanbabada oo qofku ka jiranyahay (khaas ahaan cudurrada malax-samayska ee sanbabada "suppurative lung diseases) - Hawlgabka kilyaha (qashinkii kilyaha jirka ka saari jiray oo hawo ahaan loo soo saaro sida kaadida "urea") - Hawlgabka beerka (qashinkii beerka jirka ka saari jiray oo hawo ahaan loo soo saaro) - Cudurada ku dhaca dhiigga - Sonkorowga - Xamiitada oo jirata - Kaankaro - Cillad dheefshiid - Cunnooyinka qaar Caafimaad darro ka timid ilkaha - Bolol ilkaha ah - Ciridka oo jirran - Infekshan ilkaha ah ama carun - Kaankarada ilkaha ah - Af-qaleelka (daawooyinka iyo cudurrada qaar ayaa keeno af-qaleelka) - Daawooyinka sanka lagu dhibciyo - Xasaasiyada cabburka keento - Bakteeriyda hawo la'aanta oo ku badato afka ama sanka. 90% oo ka mid ah waxyaabaha keeno af-qurunka waxay ka timaadaa bakteeriyada qurmiska oo afka ku korto, taasoo ka dhalata cudurrada aan kor ku soo xusnay. Daaweeyn la hubo wax tarkeeda kuna siman muddo 45 maalmood ah kala soo xiriir dhaqaatiirta page kan ka howl gasha. Mahad sanidiin
Cudurka baaba siirka waa cudur aad uga dhex jira bulshadena. Cudurkani waa cudur si fudud ku faafa islama markaana dhibaatoyin badan ku keena dadka uu haleelo. Cudurkani wuxuu sababi karaa xanuuno badan wuxuna awood u leyahay inuu burburiyo difaaca jirka. Cudurkana waa cudur muddo gaaban wada saameyn kara jirka qofka uu haleelo oo dhan. Sababta ayaa ah in cudurkani dago marka hore ba xubnaha aasaaska u ah banii aadamka. Sida xubnaha taranka dheef shiidka nervious system ka iyo waliba isago marka dambena saameeya neef mareenka. Sidoo kale wuxuu cudurkani saameeyaa kilyaha iyo kaadi mareenka. Calaamadaha lagu garto cudurkaan ayaa ah sida tan. 1. Daal fara badan 2.madax xanuun 3.caajis fara badan 4.dhabar xanuun 5.gaas joogta ah 6.infection 7.aragtida indhaha oo yaraato. 8. Wareer 9.dhalmada oo hakad ku yimaado dumar iyo ragba respectively. 10.caado wareer dumarka 11.tabar yarida raganimada. 12. Xanuun kaa haleela dhinac ama bar bar dhan oo is wata. Sida lug sinta wad ilaa madaxa la gaaro. 13.Muruq aan bixin oo joogta ah. Marka xanuunkan waa xanuunka ugu sameynta badan xanuunada gurguurta ee qofka la socon kara muddo dheer. Daaweyn la hubo wax tarkeeda ayaa jirta oo cudurkani lagu daaweeyo inshaa allaah caafimaad deg deg ahna aad ka heli doonto. La soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website ka daawada hadii aad dareento xanuun kan si wax badan lagaga caawiyo. walaal waxaan halkaan idiin kugu soo gudbineynaa warbixin ku saabsan cudurka baabasiirka. Cudurka baabasiirka waa cudur jira soona jiri jirey waqtiyo aad u fog. Cudurka baabasiirka waa cudur gur guurta isla markaana aheyn cudurka qabatinkiisa ama waxyeela diisa deg deg tahay laakiin waa cudur halis ah isla markaana qatar gelin kara hab nololeedka qofka qaba cudurkani. Calaamadaha lagu garto cudurkani waxaa ka mida 1: daal fara badan: daal la dareemayo marka qofka ku dhex jiro shaqadiisa ama socodka iyo guud ahaan daal fara badan. 2: caajis badan: caajis saameeya qofka inta badan noloshiisa gaar ahaan waqtiyada qofka hurdada ka toosayo. 3: madax xanuun: madaxa oo ku xanuuna sida maskaxda oo kale mar mar ama si joogta ah ba. 4: dareenka jinsiga oo hoos u dhac ku yimaado: ragga iyo dumarka ba waa ay saameysaa arrintani ragga ayaa se sii daran. 5: muruq joogta ah ama mar mar ah. Muruq 2 da garbood kaaga taagan ilaa qoorta xabadka oo xanuun laga dareemo. 6: xubnaha taranka ragga sida xiniinyaha iyo xubinka taranka oo yaraada ama 1 xiniin ama 2 da ba oo yaraada. 7: miskaha iyo wareega dhabarka kilyaha oo xanuuna. 8:gaas oo inta badan kula dersa ama aad dareento mararka qaarkood. 9: hoos u dhac guud ahaan jirka ah adiga oo maleynaya in hoos laguu jiqayo. 10: murqo xanuun: murqaha jirka oo ku xanuuna inta badan ama mar mar ah. 11:calool fadhi: caloosha oo aan socod laheyn oo aadan suuliga tageynin inta badan calooshaada oo aan waxbo ka imaanin. 12: hilmaan fara badan oo aadan lahaan jirin: adigoo si fudud wax kastaa ku hilmaamaya. 13:wahsi badan. 14: ragga oo iyagu durba biya baxa marka isku tagga ragga iyo dumarka. 15: dulqaad yari. 16: cun cun salka hoose. 17: aragtida indhaha oo yaraata indhaha oo caad fuulo aakhirka na gaara ilaa heer indho fiiq. 18:infection. Infection mar mar joogta ah sida dhanka kaadi mareenka. 19: hamiga damaca jinsiga oo yaraada ama meeshaba ka baxa mararka qaarkood. 20: dhalmo la aan. Dhalmada oo hakad ku yimaada ama la waayaba dumar iyo ragba. 21: saxrada oo dhiig la socda mararka qaarkood dhiig yar oo saxarada dhinac ka heysta. Marka yuu ku dhici karaa cudurkaan saameyntiisu badan tahay? Qofkasta ayuu ku dhici karaa cudurkaan rag iyo dumar qof weyn iyo qof yar ba. Saameynta cudurkaan waxey qaadataa mudo dheer oo gaareysa sanado in uu fahmo qofka cudurkani marka laga reebo astaamo dhowr ah oo qofka ku fahmi karo si dhaqsa ah in cudurkani la dersay. Waxaana ka mida. 1: calool fadhi. Caloosha oo aan ku socon ama xaaladeedii wax iska bedelaan dhanka saxarada. 2: tabar yari xagga raganimada ah 3: daal fara badan. 4: caajis badan. 5:cun cun salka ah ama kuus kuus yar yar ah oo salka hoose meesha saxarada ka soo baxa 6: saxarada ooo dhiig la socdo. Calaamadahaan iyo kuwo kaloo ka badan waxaa leh cudurka baabasiirka. Cudurkani mala kala qaadaa? Haa cudurkani waa la kala qaadaa waana cudur la iska dhaxlo oo hadii 2 daada waalid ama midkood qabey waa kugu dhalayaan. Cudurkaani ma sababi karaa cuduro kale? Haa cudurkaani wuxuu sababi karaa cuduro badan waxaana ka mida 1: cudurka dhiig karka 2:cudurada ku dhaca dheefshiidka. 3:sanboorka 4: gaas 5:dhagax yada kilyaha ku sameysma 6: dhiig la aan ama aneemiya. Cudurkaani daawo maleeyahay? Haa cudurkaani daawo waa leeyahay inshaa allaahu tacaalaa cudurkaan daawadiisa waxaa la qaataa muddo 2 bilood ah dawooyin afka laga qaato kaliya ayaa na wax ka tari karo oo baa bi in kara. daawooyiin la hubo wax tarkooda iyo talo iyo tusaaleyn badan kala soo xiriir dhaqaatiirta page kan ka howl gasha. Inshaa allaah dhaqaatiirta ayaa kaa saacidi doontaa habka ugu haboon iyo qaabka ugu wanaagsan ee aad daawooyinka ku isticmaaleyso iyo sida ugu wanaagsan ee daawooyinka laguugu soo gaarsiinayo. Dal iyo dibad ba waxaad nagala soo xiirii kartaan telfoonada iyo cinwaanada kor ku xusan. Dadka ku sugan dibada ka baxsan kenya daawooyinka waxaan ku gaarsiinaa qaabka postada loo yaqaano. Inshaa allaah ku soo dhawaaada amaano iyo adeeg nadiif ah. Mahad sanidiin.
Qeybaha xanuunada afka
Habka cudurada u faafaan
Ukumaha dumarka ee fiixda leh
Burooyinka naasaha dumarka
Cudurka qabsin soo boodka.
Cabeebka / umuloowga